तनहुँको गामी छाक्रा यूवा क्लबले वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सँगै विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै – Samacharpati Samacharpati तनहुँको गामी छाक्रा यूवा क्लबले वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सँगै विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै – Samacharpati
भारतमा कोरोनाको थप कडा प्रजाति भेटियो, फैलावट १००० गुणा तीव्र
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा फेरि अक्सिजन अभाव
बहुमतकाे सरकारका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान
कास्कीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित ८७७ पुगे,ेगण्डकीको अहिलेसम्मको अपडेट
तनहुँको गामी छाक्रा यूवा क्लबले वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सँगै विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै
तनहुँ,१२ माघ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. ११, गामी छाक्रा यूवा क्लबले आफ्नो प्रथम बार्षिकत्सव तथा ऋषिपञ्चमीको अवसरमा माघ ३० गतेदेखि वडास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितासँगै विविध साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । यो कार्यक्रम फागुन ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
राष्ट्रिय खेल भलिबलको संरक्षण गर्ने, खेलकुदको माध्यमबाट गाँउको पहिचान गराउने, गाँउको विकासलार्इृ प्राथमिकतामा राखेर गाँउलाई नमुना गाँउ बनाउने, खेलकुदको माध्यमबाट स्वाथ्यमा सहयोग पु¥याउने, सस्कृतिको जर्गेना गर्नेे उद्देश्यहरुको साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो ।उक्त कार्यक्रम मा भलिबल प्रतियोगिता तर्फ प्रथम, द्धितिय, तृतिय स्थान हासिल गर्ने टिमले क्रमशः रु.४०,०००, रु.२५,०००, रु.१५,००० सँगै कप, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । साथै सान्तवना हुने टिमले रु. ५,००० सँगै मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछ । खेलमा उत्कृष्ट प्लेयर, स्पाईकर, लिफ्टर र ब्लकर छनोट गरी सम्मान गरिनेछ । टिम दर्ता शुल्क रु. ४,००० रहेको छ । खेल शुद्ध वडा स्तरीय भएकोले खेलाडिको पहिचानका लागि आफ्नो पहिचान खुल्ने परिचय पत्रः नागरिकता खेलाडिले अनिवार्य देखाउनुपर्ने क्लबका उपाध्यक्ष शिखर कार्कीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम आयोजना गर्दादेखि सम्पन्न हुदासम्म विभिन्न व्यक्ति, संघ–सस्थाको भौतिक, आर्थिक, नैतिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुदा विगतका दिनहरुमा जस्तै यस कार्यक्रमलाई पनि सफल पार्नका लागि खटिरहनु भएको गामी छाक्रा आमा समुह, गामी छाक्रा टोल विकास समिती, जन जागृति यूवा क्लबका पदााधिकारीहरु प्रति अग्रिम हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण गाँउबासी, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रति सहयोगको अपेक्षा रहेको क्लबका सचिव सफल लम्सालले बताउनुभयो ।
धौलागिरी अस्पतालमा दुई जना संक्रमितको मृत्यु
पहाडकी रानी बन्दीपुरमा साहसिक पर्यटकीय बिकासले कोल्टे फेर्ला त !
तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका र व्यास नगरपालिका जोड्न सेती नदीमाथि पक्की पुल निर्माण शुरु
राष्ट्रिय सभा उपचुनावको उम्मेदवारी दर्ता आज, ओली पक्षको उम्मेदवार टुंगो लागेन
भारतमा कोरोना भाइरसको अहिलेसम्मकै संक्रामक भेरियन्ट फेला परेको छ। यो भेरियन्ट सबैभन्दा पहिले कुर्नूलमा भेटिएको थियो। हाल फैलिरहेका भन्दा यो भेरियन्टको फैलावट १००० गुणा तीव्र छ।
भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फेला परेसँगै आन्द्र प्रदेशका मानिसहरू निकै डराइरहेका बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ। कोरोनाका मौजूदा भेरियन्टभन्दा यो १००० गुणा तीव्र फैलिरहेको जनाइएको छ।
दिल्ली सरकारले आन्द्र र तेलंगना प्रदेशबाट आउने मानिसहरूलाई प्रवेश प्रतिबन्ध नै लगाइदिएको छ। यो प्रदेशमा म्यूटेन्ट भएको भेरियन्टको नाम एन४४०के राखिएको छ।
भारतमा यतिखेर कोरोना भाइरसका कयौं भेरियन्ट फैलिएको छ। केही भेरियन्टहरूले कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलाइरहेको भाइरोलोजिस्टहरूले बताइरहेका छन्‌।
डबल म्यूटेन्ट भेरियन्टले महाराष्ट्रमा ५० देखि ६० प्रतिशत संक्रमण हिस्सा ओगटेको छ। यस्तै, बेलायती भेरियन्ट पञ्‍जाब प्रान्तमा बढी फैलिएको छ। महाराष्ट्र भेरियन्ट अहिले आन्ध्र, तेलंगाना र कर्नाटकमा फैलिसकेको छ।
सरकारका केही विज्ञहरूले भने यो भाइरस निकै पहिले नै फेला परेकाले सावधानी अपनाए हुने, तर खासै डराउनु नपर्ने बताइरहेका छन्‌।
महामारीका बेला भारत सरकारले अपनाएको रवैयालाई लिएर अहिले विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। भारतले समयमै महामारी नियन्त्रण नगर्दा सो फैलिएर दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएको छ।
बुटवल — बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा पुन: अक्सिजन अभाव भएको छ । अक्सिजन अभाव भएपछि एचडीयूका धेरैजसो बिरामीको अक्सिजन मास्क झिकिएको छ ।
आईसीयूका बिरामीलाई धिमा गतिमा मात्रै अक्सिजन दिइएको अस्पतालले जनाएको छ । यहाँ आईसीयूमा १६ र एचडीयूमा ३६ गरी ५२ बिरामी छन् । अस्पतालले एचडीयू र आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत आफैं अक्सिजन जोहो गर्न आग्रह गरेको छ । अस्पतालले आफैं अक्सिजन जुटाउन भनेपछि जटिल खालका बिरामी र उनीहरूका आफन्त तनाबमा छन् । एचडीयूमा रहेका बिरामी तिलोत्तमाका हिक्मत चौधरीले बिहानैदेखि आफन्त र चिनजानका मान्छे गुहारेका छन् । ‘बिहान ३ बजेदेखि अक्सिजन झिकिएको हो,’ उनले भने ‘अस्पतालले आफैं अक्सिजन ल्याएमात्रै लगाइदिन्छौं भन्छ ।’
अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले तालिकाअनुसार सोमबार साँझ आउनुपर्ने अक्सिजन बिहानसम्म नआएपछि समस्या भएको बताए । ‘अबको आधा घण्टामा अक्सिजन आएन भने आईसीयूका बिरामीको पनि अक्सिजन झिक्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले तालिकाअनुसार अक्सिजन नआउँदा समस्या भएको बताए । सम्झौता भएको बाँकेको एचओ कम्पनीले एक सातायता आपूर्ति रोकेको छ । बाँकेबाट अक्सिजन नआएपछि रूपन्देही जिल्ला प्रशासन, ग्यास उद्योगी र अस्पताल बसेर ४ दिनअघि तालिका बनाएका थिए । रूपन्देहीमा रहेको शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिले पूर्वनिर्धिारित परिमाणमा उत्पादन नभएको भन्दै अक्सिजन नदिँदा समस्या भएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । अक्सिजन सकिएपछि अस्पतालका स्टाफ आफैं अक्सिजन उद्योग रहेको माधवलिया पुगेका छन् । केही घण्टामा अक्सिजन व्यवस्था हुने सूचना अधिकारी डा. गौतमले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले आगामी बैशाख ३० गते साँझ ९ बजेभित्र बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम पारित हुन नसकेको भन्ने समेतको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पत्र प्राप्त हुन आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई वैशाख ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएलगत्तै तीन दलले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट आवश्यक पर्ने विश्वासको मत नपाएपछि सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो ।
लमजुङमा एक साता निषेधाज्ञा
२८ बैशाख लमजुङ : कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै लमजुङमा एक साता निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
जिल्ला सदरमुकाम वेंशीशहरलगायत अन्य स्थानीय तहहरुमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेकाले थप संक्रमणलाई रोकथाम गर्न वैशाख २८ गते राति १२ बजेदेखि जेठ ३ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
निषेधाज्ञा अवधिमा औषधि उपचार, खाद्यबस्तु खरिद र खेतबारीमा कृषिजन्य कामबाहेक घरबाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। यस्तै, एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, शववाहन, निर्माण सामग्री ढुवानीका साधन, पशुपंक्षीका दाना बोक्ने गाडी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने साधन र अनुमति प्राप्त साधनबाहेक अन्य सबै खाले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ।
खाद्यन्न तथा तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिजस्ता अत्याश्यक उपभोग्य बस्तु बिक्री गर्नेबाहेक सम्पूर्ण पसल, उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसल बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म खुला राख्न पाइने छ।
धार्मिक, सांस्कृतिक जस्ता जमघट, भेला हुने कार्याक्रममा प्रशासनले रोक लगाएको छ। जिल्लाका नाकाहरुबाट समेत अत्यावश्यक सेवाका सवारीबाहेक अन्य सम्पूर्ण सवारी साधन र पैदल आवतजावतमा समेत पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ।
बैठकले जिल्लाको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञाको समय थपघट गर्नु परे जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। लमजुङको राईनास नगरपालिका–७ र दुधपोखरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा यसअघिनै निषेधाज्ञा जारी भएको थियो।
आज आमाको मुख हेर्ने पर्व, मातातीर्थ मेला स्थगित
२८ वैशाख, काठमाडौं । आज वैशाखकृष्ण पक्षको औंसी तिथि अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने यो पर्वलाई ‘आमा खुवाउने औंसी’ पनि भनिन्छ ।
यस दिन आमालाई मनपर्ने खानेकुरा खुवाएर आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान तथा आदर गरिन्छ । छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई उपहार दिई मीठा र तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने गर्दछन् । आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिदादानसहित भोजन गराई दिवंगत आमाको सम्झना गर्दछन् ।
सन्तानलाई नौ महीनासम्म गर्भमा धारण गरी जीवन दिने भएकाले आमाको महत्व बुवाभन्दा बढी मानिन्छ । त्यसैले आमालाई सम्मान गरी खुसीपूर्वक राख्नुपर्ने धर्मशास्त्रका जानकार डा. बासुदेवकृष्ण शास्त्री बताउँछन् ।
आमाको मुख हेर्ने दिनमा काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा मेला लाग्ने गर्छ । तर, यसवर्ष नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना तीव्र रुपमा फैलिएकाले मेला स्थगित गरिएको मेयर घनश्याम गिरीले जानकारी दिए । गत वर्ष पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मातातीर्थ मेला स्थगित गरिएको थियो ।
ओलीलाई माधव नेपालको ६ बुँदे पत्र, सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा
सोमवार, बैशाख २७, २०७८
काठमाडौं ः नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मध्यराति ६ बुदे ध्याकर्षण पत्र लेखेको छ। नेपाल पक्षले आफ्ना माग पुरा नभए सांसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी सहितको पत्र लेखेको हो।
नेता नेपालले लेखेको पत्रमा सर्वोच्चले नेकपालाई एमाले र माओवादीको पुरानै अवस्थामा पुर्‍याएकाले एकीकरणअघि अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशिल बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यस्तो छ नेपाल समूहको पत्र
मितिः बैशाख २६, २०७८
श्री केपी शर्मा ओली,
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी
विषयः पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटन भई उक्त दुई पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गरिनु पर्थ्यो। त्यसो नगरी तपाईले गत फागुन २८ गते पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो।
त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामी लगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो। त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्य समेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बिन गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरूलाई आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण सोध्नु भयो। पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो।
प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै तपाईले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरूलाई विघटन गर्नुभयो। जनसंगठन र पेशागत संगठनहरूमा पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुट बाहेकका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भयो। तपाईका यस्ता पार्टी विधान विपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका क्रियाकलापहरू सच्याउन हामीले विभिन्न समयका प्रत्यक्ष वार्ताहरूमा समेत आग्रह गयौं। तर त्यसप्रति तपाईले कुनै सुनुवाई गर्नुभएन। यसबाट देश, जनता र पार्टीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशील भएर तपाईले प्रतिनिधि सभामा यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कुरा गर्नु भएको छ। यस्तो विषयमा समेत तपाईले पार्टी भन्दा बाहिर समर्थनको लागि अनुनयविनय गर्नुभयो भने पार्टीमा आफ्नो गुटबाहेकको पंक्तिप्रति शत्रुवत् व्यवहार देखाइरहनु भएको छ।
तपाईले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्नेभनी आफु निकट व्यक्तिहरूलाई खटाएझै गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लङ्ग हुन्छ। वक्तव्यमा तपाईले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीति विरोधी क्रियाकलापहरूमा पर्दा हाल्न अरुमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। यस्तो स्थितिमा निम्नलिखित कुराहरूको आधारमा मात्र तपाईले विश्वासको मत लिने निर्णयबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नसकिने यथार्थबारे जानकारी गराउन चाहन्छौं।
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।
२. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने।
३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने।
४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप(प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने।
५. सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने।
६. उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने। यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने। हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपयुक्त कुराहरूलाई गम्भीररुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाई र तपाई निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आव्हान गर्दछौं। हाम्रा उक्त जायज आवाजहरूलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ।
त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ। यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाई नै हुनुहुने छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा, प्रदेश प्रमुखद्वारा नयाँ सरकार गठन आह्वान
पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा सोमबार मतदान हुने तय भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केही बेरअघिमात्र उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
अधिवेशन बोलाएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि बैशाख १५ मा मतदान हुने कार्यसूची रहेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराएको भन्दै सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अधिवेशन अनिश्चितकालीन स्थगीत गरेका थिए । त्यसपछि सोमबारलाई अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने दिन तोकिएको थियो । उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं।जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका छन् ।
आज केहीबेर अघिदेखि सभापति देउवासँग छलफल भइरहेको स्वकीय सचिव भानु देउवाले देखापढीलाई बताए। माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो देउवासँग भेट्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको विकासमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कानून दिवस, २०७८ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आजको दिन न्याय, समानता एवम् विधिको शासनप्रति सम्मान र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विशेष दिन पनि हो भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वको हैसियतबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।’
आजको विशेष दिनले न्याय, समानता र विधिको शासनको प्रत्याभूतिको लागि क्रियाशील रहन सबैमा थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानन्याधीश राणाले कानुन दिवस कानून र न्याय क्षेत्रका लागि मात्र नभई सबै क्षेत्र र नागरिकको तहसम्म पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा मनाउन पनि विशेष आग्रह गरेका छन् ।
विक्रम सम्वत् २००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा ‘कानुन दिवस’ मनाइन्छ । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गर्दथ्यो । तर गत वर्ष र यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सर्वोच्चले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी कानुन दिवस मनाउन सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
मोन्चेनग्लाडबचमाथि फराकिलो जितसँगै बायर्नले मनायो उपाधिको खुसी
काठमाडौं। रोबर्ट लेवानडोवस्कीको ह्याट्रिकप्रेरित बायर्न म्युनिखले बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबचविरुद्ध ६–० नतिजा निकाल्दै लगातार नवौं पटक जर्मन बुन्डेसलिगा जितेको खुसी मनाएको छ।
बोरुसिया डर्टमण्डले दोस्रो स्थानको आरबी लाइपजिगलाई हराइदिएपछि बायर्नले तीन खेलअघि नै उपाधि जितिसकेको थियो। बायर्नको जितमा लेवानडोवस्कीले तीन तथा थोमस मुलर, किंग्सले कोम्यान, लोरी सानेले एक एक गोल गरे। लेवानडोवस्कीले बुन्डेसलिगामा २०० गोलको कोशेढुंगा पार गरे।
भारतका दूरदराजमा रहेका गाउँहरुमा ड्रोनबाट खोप पुर्‍याइने भएको छ।
सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थामा ड्रोनको मद्दत लिन स्वीकृति दिएको छ। तेलंगाना सरकारले यही महिनाको अन्त्यदेखि यो कार्यको परीक्षण गर्ने भएको छ।
यसका लागि मानवरहित एयरक्राफ्ट सिस्टमको नियमलाई खुकुलो पारिएको छ। यो अनुमति एक वर्षसम्म वैध हुने पनि सरकारले बताएको छ।
ड्रोनबाट कोरोना खोप
कोरोना जितेकै हो चीनले?
एजेन्सी। संसारका थुप्रै देश यतिखेर कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छन्, चीन भने निस्फिक्री उन्नतिपथमा लागेको देखिएको छ।
चिनियाँ नागिरक सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। कोरोनाको नयाँ संक्रमण त्यहाँ देखिएको छैन। कोरोनाको पहिलो घटना चीनको वुहानमा फेला परेको बताइन्छ, तर त्यो विशाल मुलुकले सारा संसारलाई दुःख दिइरहेको यो महामारीबाट कसरी मुक्ति पायो, सबैका निम्ति अचम्मको कुरा हुन पुगेको छ।
आज कानुन दिवस मनाइँदै
photo : hamropatro
काठमाण्डाै । आज विभिन्न कार्यक्रम गरी कानुन दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा विस. २००९ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको दिनको सम्झनामा बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ ।
यो ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थानविन्दुको रुपमा लिइन्छ ।
कानुनसँग सम्बन्धित संघसँस्थाले २०३१ सालदेखि बैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउँदै आएका छन् । कोरोना सङक्रमण जोखिमका कारण यसवर्ष भौतिक रुपमा कार्यक्रम हुने छैनन् । दिवसका अवसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले न्याय, समानता र विधिको शासनको प्रत्याभूतिका लागि क्रियाशील रहन दिवसले सबैमा थप हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै, सभामुख सापकोटा र देउवा नजाने
काठमाण्डाै । संवैधानिक परिषद्को बैठक अाज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बिहान ९ बजेका लागि बोलाउनुभएकाे छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो । गएको मंसिर ३० गतेपछि परिषद्को बैठक बसेको छैन । आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले नजाने बताउनुभएको छ ।
सापकोटा यसअघिको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थिएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चार जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीन जना मात्र भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बैठकमा सहभागी भए नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ । तर प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभए कोरम पुग्दैन ।
लोकसेवा आयोगमा सबै पदाधिकारी रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई पद रिक्त छन् । महिला आयोगसहित अरु केही संवैधानिक आयोगमा पनि सदस्य पद खाली छन् ।
माधव नेपाल समुहले केपी ओलीलाई दियो २४ घण्टे अल्टिमेटम
काठ्माण्डौ । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले ओलीलाई २०७५ जेठ २ गते फर्कन अल्टिमेटम दिएको एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
तर अदालतको फैसलाअनुसार एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व मान्न ओली तयार नभए सामुहिक राजीनामा गर्न सांसदहरु तयार भएका छन् । यसबारे थप छलफल गर्न आज स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति भोलि संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यस अगाडि नै ओली २८ फागुन यताको निर्णय रद्ध गर्न तयार नभए नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा गर्ने तयारी भएको छ ।
सन् २०२२ का लागि भरिएको डीभीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार वैशाख २५ गते राति ९ः४५ बजेबाट आवेदनको नतिजा निःशुल्क हेर्न सकिनेछ । नतिजा हेर्न आवेदन दिँदा उपलब्ध गराइएको कन्फर्मेशन नम्बर प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
तपाईंले दिनुभएको आवेदनको नतिजा https://dvprogram.state.gov मा गएर निशुल्क हेर्न सकिनेछ, र नतिजा हेर्न आवेदन दिंदा तपाईंलाई उपलब्ध गराइएको कन्फर्मेशन नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
काठमाडौं-किरण गजमेर पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन्। कारण हो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन’मा उनको दिएको प्रस्तुति। ब्लाइण्ड राउण्डमा चारै जना जजलाइ आफु तिर घुमाउन सफल गजमेरले शुक्रवार ब्याटल राउण्डमामा समेत उत्कृस्ट प्रस्तुति दिदै नकआउट राउण्डमा प्रबेस गरेका छन।
‘द भ्वाइस अफ नेपालु मा सहभागी हुनु अगाडी समेत उनले केहि गीतहरु बजारमा ल्याइसकेका थिए। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका गजमेर भन्छन म जहा रहेपनि नेपाली गीत संगीत प्रतिको माया कहिलै कम भएन।
रियालिटी शोमा सहभागी हुनैको लागि नेपाल आएका उनि नेपाली गीत संगीतमा केहि गर्ने चाहाना भएकाले सम्पूर्ण गीत संगीत प्रेमीहरुलाई भोटिंग गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। उनका ठुली ठुली ,छपक्कै ,मै बनाउला माली ,समाउ हात मेरो लगायातका गीतहरु बजारमा आइसकेका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजान प्रचण्डको अनुरोध
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजान सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख समते भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनसाय संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
ओली सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले एकपटक पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत श्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कोभिड परीक्षण नेगेटिभ, २६ सांसदलाई संक्रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोभिड पीसीआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । हिजो बालुवाटारमा गरिएको एक सय बढीको परीक्षणमा एक दर्जन जतिलाई कोरोना देखिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने सुरक्षित हुनुहन्छ ।
त्यस्तै संसद सचिवालयले गरेको १२ सय ३५ जनाको पीसीआर परीक्षणमा १२ प्रतिशतलाई संक्रमण भएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यही बैशाख २२, २३ र २४ गते गरिएको परीक्षणमा प्रतिनिधिसभाका १८ र एक जना राष्ट्रिय सभाका १ गरी १९ जना सांसदलाई कोरोना देखिएको छ । त्यसैगरी अहिलेसम्म २६ सांसद संक्रमित छन् ।
संक्रमण कम भएपछि फिर्ता गर्नेगरि कास्की प्रहरीले संकलन गर्यो १८७ अक्सिजन सिलिण्डर
पोखरा । कोरोनाको दोश्रो लहर बढेसंगै देशका विभिन्न ठाउँमा अक्सिजनका सिलिण्डरको अभाव भएको छ । यस्तै कास्कीमा पनि आगामी दिनमा अक्सिजनको सिलिण्डर अभाव हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर कास्की प्रहरीले सिलिण्डर संकलन गरेको छ ।
प्रहरीले पोखराका बिभिन्न कम्पनीका अक्सिजन ग्याँस सिलिण्डर कोरोना संक्रमण सकिएपछि सम्बन्धीत कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरि १ सय ८७ सिलिण्डर संकलन गरेको हो ।
ति सिलिण्डरहरु पछी सम्बन्धित संस्था तथा कम्पनीहरुलाई नै फिर्ता गर्नेगरि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने कास्की प्रहरीले बताएको छ ।
यसैबीच कास्की प्रहरीले कतै ग्यासको सिलिण्डर खालि भए सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
पोखरामा ‘आइसोलेशन चाहिए यि नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस्’
पोखरा । पोखरा महानरगपालिकाले कोरोना संक्रमितहरुका लागि आइसोलेशन व्यबस्थापनका लागि सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीद्धारा जारी अनुरोध पत्रमा आइसोलेशनका लागि स्वास्थ्य महाशाखाको ९८४६०३५३४९,९८५६०३२७७५ र९८५६०२३३६८ मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
यस्तै होटल आइसोलेशन संचालन गर्न इच्छुक होटलले समपर्क गर्न महानगरले अनुरोध गरेको छ ।
घरमै आइसोलेशनमा बस्नेहरुका लागि ९८६०३४२३२८ र ९८१६१९८१६१ मा दिनको एकपटक सम्पर्क गरी परामर्श लिन अनुरोध महागरले गरेको छ ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत अन्य समूहतर्फको रिक्त एक सिटका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता गर्न लागिएको हो ।
उम्मेदवारी दर्ताको समय विहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेकपा एमालेले उम्मेदवार अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । पछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थापाको सांसद पद गुमेकाले आगामी जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
खाली भएको यो क्षेत्रमा एमालेले बादललाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउन चाहेको छ भने बादल जितको ग्यारेन्टी नभएसम्म उम्मेदवारी नदिने अडानमा छन् । जसका कारण अहिलेसम्म एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार चयन भइसकेको छैन ।
संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट भने यो पदमा डा. खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । देवकोटा माओवादी, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त उम्मेदवार हुन् । उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति यसअघि विपक्षी दलहरुबीच भएको थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा जेठ ६ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् ।
२४ बैशाख काठमाडौं : उपत्यकाका अधिकांश औषधि पसलहरुमा अहिले सबैभन्दा बढी बिक्री हुने औषधि भनेको भिटामिन सी र भिटामिन डी हो । कोरोनासँग लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युन सिस्टम) बलियो बनाउने भन्दै अहिले भिटामिन सी र भिटामिन डीको अत्यधिक बिक्री, वितरण र प्रयोग भइरहेको छ ।
तर, चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावी भिटामिन डीको प्रयोग गर्दा यसले हड्डी दुखाउनेदेखि मिर्गौला ड्यामेज गर्नेसम्मको असर गर्ने चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन् ।
भिटामिन सी र भिटामिन डी दुबैले इम्युनिटी बढाउने भए पनि शरीरमा यसको मात्रा बढी भएको अवस्थामा यसले झनै घातक असर गर्ने चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन् । शरीरमा भिटामिन सीको मात्रा बढी हुँदा दिसा–पसिाबबाट बाहिर जाने भएकाले केही असर नगर्ने तर भिटामिन डीको मात्रा बढी भएमा शरीरमा नै बसिरहने भएकाले यसले मिर्गौला बिगार्नेदेखि हड्डी दुखाउनेसम्म असर गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
वीर अस्पतालका जनरल फिजिसियन प्राध्यापक डाक्टर विधाननिधि पौडेल शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा बढी भएमा रगतमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्न गई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, कमजोर महसुश हुने र बारम्बार पिसाब लाग्ने हुन सक्छ । शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा बढी भएको अवस्थामा हड्डी तथा जोर्नी दुख्ने, मिर्गौलामा पत्थरी हुने र मिर्गौला नै ड्यामेज पार्नेसम्मको समस्या हुन सक्छ ।
पौडेलका अनुसार अहिले धेरै मानिसहरुमा भिटामिन डीको कमी देखिएको भए पनि जथाभावी भिटामिन डीको बढी प्रयोग भने हानिकारक हुन सक्ने छ । पहिले रगत जाँच गरेर भिटामिनडी को मात्रा कति छ, हेर्ने र मात्रा कम भएको अवस्थामा मात्रै चिकित्सकको सल्लाहअनुसार भिटामिन डी ट्याब्लेट खान मिल्ने उनी बताउँछन् ।
पाटन अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक अर्जुन कार्की पनि शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा बढी हुँदा यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउनसक्ने चेतावनी दिन्छन् । आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा भिटामिन डी खाएमा त्यो विष समान हुने कार्कीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘शरीरमा भिटामिन डीको कमी छ भने त जाँच गरेर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खानु बेस नै हुन्छ । तर, इम्युनिटी पावर बढाउने भन्दै जथाभावी यसको प्रयोग गरे किड्नी ड्यामेज पनि गरिदिन सक्छ । शरीरलाई चाहिनेभन्दा बढी भिटामिन डी खाएमा त्यो टक्सिन बन्छ र टक्सिन भनेको विषजस्तो नै हो । त्यसकारण भिटामिन डी आफूखुशी खानुहुँदैन ।’
कार्कीका अनुसार अहिले नेपालमा धेरैलाई भिटामिन डीको कमी देखिएको भए पनि आफूखुशी मेडिकलबाट किनेर खानु गलत हो । रगत जाँच गरेर भिटामिन डी कमी देखिएको अवस्थामा भने ३ महिना, ६ महिना वा ९ महिनासम्म खानका लागि दिन सकिन्छ ।
तर, कमीको अवस्था हेरेर कति खाने भनेर चिकित्सकको सल्लाह (प्रेस्किप्सन) मा मात्रै खानुपर्ने कार्की बताउँछन् । जथाभावी खाएमा यसले हाइपर क्याल्सिेमिया गराउने र हाइपर क्याल्सेमियाले हड्डीमा समस्या ल्याउने तथा मिर्गौला लगायतका भागमा पत्थरी बनाउने कार्कीको चेतावनी छ ।
सामान्यता घामबाट पनि भिटामिन डी पाउने भएकाले घाममा हिँडिरहने वा काम गर्ने व्यक्तिहरुले घिटामिन डी खानु नपर्ने कार्की बताउँछन् । तर, कोठाभित्रै बसेर काम गर्ने वा घरभित्रै बसिरहने र खानपानमा ध्यान नदिनेहरुलाई भने भिटामिन डीको कमी हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
मध्य भोटेकोसीको आइपिओ निष्काशन स्थगित
२४ बैशाख : काठमाडौं । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ निष्काशन स्थगित भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावितका लागि निष्कासन खुला गरेको आइपिओ तत्काललाई बन्द हुने जनाएको छ ।
बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा (वैशाख २३ गते) देखि वैशाख ३१ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीयवासीलाई आइपिओ भर्नका लागि हिँडडुलमा समस्या हुने भएकाले तत्काललाई स्थगित गर्न लागिएको हो ।\_
अब कहिलेबाट बिक्री खुला गर्ने भन्ने बारेमा अर्को सूचना सार्वजनिक गरिने पनि बिक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ । मध्य भोटेकोशीले वैशाख २१ गतेबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका आयोजना प्रभावितका लागि कुल ६० लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीले कुल ६० लाख कित्ता आइपिओमध्ये ३०% ले हुने १८ लाख कित्ता सेयर भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ५ (साविकको लिस्ती र मार्मिङ गाविस) र बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ५,६,७ र ८ (साविकको गाती, घुम्पांग र मानेश्वरा गाविस) का स्थानीयलाई छुट्टयाइएको छ । यस्तै, ७०% ले हुन आउने ४२ लाख कित्ता सेयर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानीयवासीको लागि छुट्याइएको छ ।
गण्डकीमा कोरोना संक्रमण : भरिए अस्पताल, सरकारी तयारी शून्य
२४ बैशाख पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रुपमा वृद्धि भएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की ‘हटस्पट’का रुपमा देखापरेको छ । झण्डै दुई सातादेखि कास्कीको पोखरामा दैनिक सयौं संक्रमित थपिएका छन् । कास्कीका ग्रामीण भेगमा सामान्य प्रभाव देखिए पनि पोखरामा संक्रमण तीव्ररूपमा वृद्धि भएको छ ।
११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमित कास्कीमा छन् । कास्कीमा ११ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये २ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । पछिल्लो समय संक्रमित अधिकांश ब्यक्ति होम आइसोलेसनमै बसेका छन् । जटिल अवस्थाका संक्रमितबाहेक अन्यलाई अस्पतालमा बेडको ब्यवस्था नभएका कारण धेरै संक्रमितहरु घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय संक्रमण वृद्धिसँगै जटिल अवस्थाका संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेशमा सीमित श्रोत र साधनको जोहो गरेर सञ्चालन गरिएका अस्पतालका बेडसमेत भरिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा जटिलखालका संक्रमितलाई उपचार गर्दै आएका पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सरुवा रोग तथा संक्रामक अस्पतालका सबै बेड भरिभराउ छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड आइसोलेसन सञ्चालनमा आएको ५ दिनमै भरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका डेढ दर्जनभन्दा बढी अस्पताल सञ्चालनमा रहे पनि आधादर्जन अस्पतालमा मात्र आइसियु सेवा छ । कोभिडका संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु वार्ड भएका अस्पतालहरुले महँगो रकम असुल्ने गरेको बिरामीका आफन्तहरु बताउँछन् । अहिले चरक मेमोरियल अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, मेडिप्लस अस्पताल लगायत निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् ।
करिब ५० सिट क्षमता भएको सरुवा रोग तथा संक्रामक अस्पतालमा अहिले ५५ जना संक्रमितको उपचार भईरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विकास गौचनले जानकारी दिए । संक्रमितको संख्यासँगै गम्भीर प्रकारको बिरामीको संख्या पनि बढेको उनले बताए । ५५ जना संक्रमितमध्ये ४० जनाको अवस्था जटिल रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने दर उच्च रहेका कारण धेरैजना संक्रमित छन्,’ उनले भने, ‘एकै पटक धेरै संक्रमित भएको र अस्पतालमा स्रोत, साधन सीमित भएकाले धेरैजसो होम आइसोलेसनमा छन् । उनीहरु स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल भर्ना हुन आउने भएकाले धेरैजसो संक्रमित गम्भीर अवस्थाका छन् ।’
अस्पतालमा दैनिक ३०÷३५ वटा ठुला अक्सिजन सिलिन्डर खपत भईरहेको उनले बताए । ‘तर, अस्पतालमा अहिलेसम्म अक्सिजनको अभाव भएको छैन,’ डा.गौचनले भने, ‘अस्पतालमा तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी बिरामी भर्ना गरेर राखिएकाले अब भने कोरोनाको जटिल अवस्थाका बिरामी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
डा.गौचनका अनुसार बिरामीको उपचारमा ६ जना स्टाफ नर्स २४ घण्टा खटिँदै आएका छन् । थोरै जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन गरेर अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए । दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले थप केही स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी करारमा माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो अस्पतालका रुपमा रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कोभिड उपचार केन्द्रसमेत भरिभराउ भएको छ । एक साता अघि पुरै खाली रहेको ४० बेडको आइसोलेसन अहिले भरिभराउ भएको छ ।
यहाँ १५ वैशाखदेखि संक्रमित राख्न सुरु गरिएको हो । सुरुमा ४० बेड भनिएकोमा बिरामी बढेपछि एक हप्तामै बेड संख्या ५० पु¥याइएको छ । त्यस वार्डमा कोरोनाका लक्षण भएका गम्भीर बिरामीलाई राख्ने गरी ५० बेडको बनाइएको हो । गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि छुट्याइएको बेडमा ९ जना बिरामी भर्ना गरिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा भर्ना भएका अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ । पछिल्लो समय आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामीमा धेरैजसो अक्सिजन चाहिने खालका रहेको प्रतिष्ठानका कोभिड उपचार केन्द्रका फोकल पर्सन डा.शरदचन्द्र बरालले बताए ।
अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको उनले बताए । ‘प्रतिष्ठानमा अहिले दैनिक ६०÷६५ सिलिन्डरसम्म अक्सिजन खपत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको नियमित व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।’ गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहिरबाट समेत कोभिडका बिरामी अस्पतालमा आउने गरेको उनले बताए । डा.बरालले कोरोनाको पहिलो लहरमा अस्पताल भर्ना हुने अधिकांश संक्रमित दीर्घरोगी र ५० वर्ष उमेर माथिका भए पनि अहिले भने बच्चादेखि युवायुवतीसमेत संक्रमित भएको बताए ।
अस्पतालमा थप आइसोलेसन निर्माण र बेड व्यवस्थापन गनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै कोभिडका बिरामीलाई सेवा दिनु हो,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्नु अहिले हामी सवैको दायित्व हो ।’ प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तो छ गण्डकीमा संक्रमणको अवस्था
नयाँ वर्ष आगमनसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको हो । पछिल्लो २२ दिनमा प्रदेशभर ३ हजार ४६१ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । तीमध्ये तीन हजार ३१ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।
सक्रिय संक्रमितमध्ये करिव २ हजार जना कास्कीका रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । हालसम्म प्रदेशमा २० हजार ४२७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा १७ हजार १९५ जना निको भएका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २४१ पुगेको छ । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार २०५ जना होम आइसोलेशनमा छन् । प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ४३२ छ । गण्डकीमा अहिलेसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
त्यसमध्ये प्रदेशमा २० हजार ८२८ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यसैगरी अहिलेसम्म प्रदेशमा १७ हजार १५९ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । प्रदेशमा पछिल्लो २२ दिनमा ३१ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारी शून्य
प्रदेशमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिँदा समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक तयारी गर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष संक्रमण फैलिएपछि निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन हटाइ सकिएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरुले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण थालेका छैनन् । तत्कालीन अवस्थामा संक्रमण पुष्टि भएकालाई सम्वन्धितकै घरमा होम आइसोलेसनमा राख्ने स्थानीय सरकारको योजना छ ।
पोखरा महानगरका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हेमन्त शर्माले कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर घटेसँगै आइसोलेसन हटाएको जानकारी दिँदै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । उनले निजी अस्पतालमा पनि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न थालेपछि महानगरले आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हटाएको बताए ।
कोरोना संक्रमण फैलिएको लामोसमय बिते पनि प्रदेश सरकारले समेत पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन । प्रदेशका ११ जिल्लामा संक्रमितका लागि आवश्यक आइसियुसहितका वार्ड र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेशका बागलुङ, कास्की र गोरखामा सीमित बेडबाहेक अन्य जिल्लामा आइसियू वार्ड र आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्था हुन सकेको छैन ।
उपकरण र जनशक्ति अभाव
सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा जम्मा २४३ वटा आईसीयु बेड छन् । तीमध्ये ४४ वटा आईसीयु बेड प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेशमा जम्मा ६७ वटामात्र भेन्टिलेटर उपलब्ध छ । अहिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले प्रदेश सरकार यतिबेला संसदकै अंकगणितको जोड घटाउमा लागेको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले मणिपाल शिक्षण अस्पताल, चरक मेमोरियल, फिस्टेल हस्पिटल, गण्डकी मेडिकल कलेजलाई शूल्क लिएर उपचार गर्न दिए पनि ती अस्पताल समेत भरिएका छन् । संक्रमणको रफ्तार यसैगरी बढ्दै जाने हो भने बिरामीको उपचार कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकार बेखबर छ ।
अर्कोतिर संक्रमणको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर बढी घातक र अत्यधिक संक्रामक देखिए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले त्यसअनुसार उपकरण र जनशक्तिको जोहो गर्न सकेको देखिँदैन ।
डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिबन्धमाथि पुनर्विचार गर्न फेसबुकलाई आदेश
२४ बैशाख : फेसबुकको सर्वोच्च अदालत मानिएको निगरानी बोर्डले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लागेको प्रतिबन्धमाथि पुनर्विचार गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको छ ।
तत्कालका लागि ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध सदर गरेतापनि बोर्डले ट्रम्पमाथि स्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने कुराको आलोचना गर्दै यस्तो स्थायी प्रतिबन्ध फेसबुकको सजायँ नीति भित्र नपर्ने जनाएको छ ।
साथै बोर्डले टम्पमाथिको प्रतिबन्धको निर्णय पुनर्विचार गर्न फेसबुकलाई आदेश दिँदै सबैखाले फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि लागू हुने खालको न्यायसँगत उपाय अबलम्बन गर्न भनेको छ । अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थकको हिंसापश्चात् गत जनवरी देखि फेसबुक र इन्स्टाग्रामले ट्रम्पलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् ।
ट्रम्पलाई स्थायी रुपमा निलम्बन गर्ने फेसबुकको प्रारम्भिक निर्णय दिशाहीन तथा मापदण्डहीन देखिएको भन्दै फेसबुकले गर्ने प्रतिकार्य भनेको सबै प्रयोगकर्ताका लागि लागू हुने खालका नियमहरुसँग तादात्म्य राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा फेसबुकले ६ महिनाभित्रमा पुनर्विचार गरी चित्तबुझ्दो जवाफ निगरानी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डकी सहअध्यक्ष हेले थोर्निंग स्कमिडटले आफुहरुसँग यो मामिलाको सजिलो उत्तर नरहेको बताइन् । फेसबुकले बोर्डको निर्णयको कदर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस घटनाका विषयमा फेसबुकले गरेको मूल्यांकनलाई पछाडि फर्केर हेर्न बोर्डले आग्रह गरेको भन्दै उनले सबै प्रयोगकर्तालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र जथाभावी सजाय गर्न नहुने बताए । यस सम्बन्धका प्रतिक्रिया जनाउँदै फेसबुकले बोर्डको निर्णयका विषयमा विमर्श गरिने र प्रष्ट तथा सन्तुलित कार्य निर्धारित गरिने बताएको छ ।
बोर्डको आदेशको अर्थ ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि कायमै रहनेछ । तर स्थायी प्रतिबन्धका विषयमा चाहीँ फेसबुकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उसको आदेश छ । स्मरण रहोस् फेसबुक, ट्वीटर तथा गुगल लगायतका प्लाटफर्मबाट प्रतिबन्धमा परेका ट्रम्पले मंगलबारमात्र आफ्नै नयाँ वेबसाइट सुरु गरेका छन् ।
फेसबुकको निगरानी बोर्डको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै ट्रम्पले वेबसाइटमा लेखेका छन् ‘फेसबुक, ट्वीटर र गुगलले जे गरेका छन् त्यो पूर्णतः लज्जाजनक छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट वाक स्वतन्त्रता खोसियो किनकी वाम मनोरोगीहरु सत्यबाट डराएका छन्।
‘आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ’मा कुशल भुर्तेल मनोनित
२४ बैशाख दुबई : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले अप्रिल महिनाका लागि ‘आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ’ मा नेपालका कुशल भुर्तेलको नाम मनोनयन गरेको छ। मनोनयनमा कुशलसँगै पाकिस्तानका बाबर अजाम र फखर जमान परेका छन्।
कुशलले भर्खरै सम्पन्न त्रिदेशीय टी–२०आई सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई सरिज जिताउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। आईसीसीले सोही प्रदर्शनको आधारमा उनलाई ‘प्लेयर अफ द मन्थ’मा मनोनयन गरिएको जनाएको छ।
कुशलले डेब्यू खेलदेखि लगातार तीन अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। उनले डेब्यू खेलदेखि टी–२०आईमा लगातार तीन अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेर इतिहास रचेका थिए।
कुशलले नेपाल, नेदरल्यान्ड र मलेसिया सम्मिलित त्रिदेशीय सिरिजमा २७८ रन प्रहार गरेका थिए।
मनोनयनमा परेका कुशललाई आईसीसीको वेबसाइटमा गएर भोट गर्न सकिने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ।
अक्सिजन नपाउँदा भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
२४ बैशाख भक्तपुर : कौशलटारस्थित भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलमा अक्सिजन अभावमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कमलविनायकका ४५ वर्षीय पुरुषको बिहीबार राति मृत्यु भएको हो।
त्यस्तै, सोही अस्पतालमा अक्सिजन नभएपछि ललितपुरको अल्का अस्पताल रिफर गरिएका पोखरा स्थायी घर भई भक्तपुर बस्दै आएका ६० वर्षीय एक पुरुषको पनि मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएको बताउँदै अन्य बिरामीलाई पनि अन्यत्र रिफर गरेको स्रोतले बताएको छ। अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य बिरामीलाई धमाधम रिफर गर्न थालेपछि बिरामीका आफन्तले राति अस्पतालका चिकित्सकलाई हातपात समेत गरेको बताइएको छ।
यस सम्बन्धमा अस्पतालका प्रमुख श्यामकृष्ण श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पहिले मोबाइल फोन नउठाएका उनले पछि मोबाइल फोन नै स्विच अफ गरे। भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल हालै मात्र सञ्चालनमा आएको अस्पताल हो।
दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल
२४ बैशाख काठमाडौं : तिन वर्ष अघि दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले अल्पमतमा पुगेका छन्। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका हुन्।
संसदको विशेष अधिवेशनमार्फत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा सहयोग माग्न दलबलसहित पुगे।
एमालेका तर्फबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उप-चुनावमा विपक्षी दलले गठबन्धन बनाएपछि ओली पार्टीका नेताहरूलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए। यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेता कृष्णप्रसाद सिटौला केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलगायत सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग विश्वासका मतका लागि सहयोग मागेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस पार्टीका सह-महामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए। सत्ताधारीको व्यवहार कांग्रेस सहकार्य गर्ने खालको नभएको कांग्रेसका नेताको बुझाई छ। डा. महतले अहिले हामीले विश्वासको मतको विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने वातावरण नभएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा लोकतन्त्रका मुल्य र मान्यता जोगाउनु पर्नेका कांग्रेसले जोड दिएको थियो। कांग्रेस नेताहरुसँग छलफलका लागि पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको लडाइँमा दुवै पार्टी एउटै मोर्चामा लडेको भन्दै कांग्रेसका नेतालाई फकाएका थिए। तर, कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा ओलीलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ।
मंगलबार मात्र कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। ओलीले लिने विश्वासको मतलाई विफल बनाउन अरु दलसँग पनि छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बैठकले गरेपछि प्रधानमन्त्री पद थप धरापमा छ। यता माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिदिएको छ।
यस्तै, आफ्नै पार्टी भित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली घेरामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दै गर्दा एमाले भित्रैबाट समानान्तर कमिटी चलाउँदै आएका माधवकुमार नेपाल समूहप्रति प्रधानमन्त्री अझै सशंकित छन्।
यता जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र समूह) का नेता ओली सरकार बहिर्गमन हुने दाबी गरिरहेका छन्। ओली सरकार बहिर्गमन गर्ने विषयमा बुधबार प्रचण्ड, माधव नेपाल र हाम्रो अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थियो। प्रतिगामी कदम चाल्नेलाई जसरी भए पनि हटाउनैपर्छ भनेर लागेको जसपा बाबुराम–उपेन्द्र समूह लागेको छ। ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि सडकमा निस्केकाहरू अहिले एकजुट हुनुपर्नेमा यो समुह एकमत छन्।
दोधारमा माधव समुह
माधव समुह विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री थप दबाबमा रहेका छन्। ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको नेपाल समूह ओलीलाई विश्वासको मत दिने समय नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। तर, अझै कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलको क्रममा विभिन्न विषयहरु उठेका छन्। अहिले हामीले कुनै निष्कर्ष निकालेका छैनौँ’ उनले भने।
ओलीले आफ्नो गल्ती नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मका विषय उठिरहेको उनी स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘छलफलको क्रममा सामूहिक राजीनामाको कुरा पनि उठेको छ। तर, त्यो बाहिर प्रचार भएजस्तो अन्तिम निर्णय भइसकेको भने होइन।’
विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?
नेपालको संविधानको धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (१) अनुसार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्।
संविधान अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
यस्तै, (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छैन्।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। तर, उपधारा (७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
२७ गते पछिको अवस्था कस्तो होला?
२७ गतेपछिको अवस्था अहिले नै निर्क्यौल गर्न सकिने खालको रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुराको परिक्षण हुने र त्यसपछि नेपालको राजनिति अगाढि बढ्नेछ।
जसपाको बाबुराम-उपेन्द्र समुह, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका छन्। एमाले भित्र माधवकुमार नेपाल समुह भने अझै अन्योलमा रहेको छ। यसरी हेर्दा ओलीले कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्लान हेर्न बाँकी नै छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ प्रक्रिया अगाढि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
‘अहिले सरकारको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा रहेको छ। यो बेला कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो’, उनले भने।
के छ धारा ७६ मा ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे उल्लेख गरिएको छ। उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।
तर, (२) उपधारा (१) बमोजिम – प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। उपधारा (३)मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा वढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
यस्तै, (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
यस्तै, (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। (६) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस घारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु
२४ बैशाख काठमाडौं : कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा थप १० जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा गएरातिदेखि आज विहानसम्म १० जनाको ज्यान गएको बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन तेज वलीले जनाकारी दिए।
मृत्यु हुनेमा बर्दियाका ४७ वर्षीय पुरुष, कैलालीकी ४८ वर्षीय महिला छन्। आठ जना भने बाँके जिल्लाका रहेको वलीले बताए। मृत्यु हुनेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-६ का ३४ वर्षका पुरुष, नेपालगञ्ज -१८ की ५६ वर्षीया महिला, नेपालगञ्ज कै ५२ वर्षीय पुरुष, ६० वर्षकी महिला ५४ वर्षीया महिला र ५४ वर्षकै पुरुष छन्। त्यस्तै २७ वर्षकी महिला र ६१ वर्षका पुरुष संक्रमणबाट ज्यान गएको छ।
यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १६९ पुगेको छ। बाँकेमा बाहिरी जिल्लाबाट उपचारमा आएका १३० जनाको मृत्यु भएको छ।
उपत्यकामा २४ घण्टामा थपिए ३ हजार ९ सय ७२ कोरोना संक्रमित
२३ बैशाख : काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा ३ हजार ९ सय ७२ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं ३ हजार १ सय ६३, ललितपुर ५ सय ६७ र भक्तपुर २ सय ४२ संक्रमित भएका छन् । २४ घण्टामा २० हजार ३ सय ६७ पीसीआर परीक्षण भएको थियो ।
देशभर बिहीबार ८ हजार ९ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
एन्टिजेन विधिबाट गरिएको ७ सय ७५ परीक्षणबाट १ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ६८ हजार ५ सय ८० पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ७ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
२३ वैशाख :
वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ । उनको बिहीबार सुन्धारास्थित काठमाडौं न्यूरो एन्ड जनरल अस्पतालमा निधन भएको हो ।
छातीमा समस्या देखिएपछि केही दिन अगाडि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ८४ वर्षीय प्रधानको उपचारका क्रममा निधन भएको संगीतकार संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण शेषले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘मलाई भाउजूले नै फोन गर्नुभएको थियो । केही समय अगाडि मात्र उहाँको निधन भएको हो । म अस्पताल आइपुगेको छु,’ उनले भने ।
प्रेमध्वजको जन्म १९९४ सालमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा भएको थियो । उनलाई नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ‘गोल्डेन भ्वाइस’ उपनामले पनि चिनिन्छ ।
सन् १९६५ मा प्रेमध्वजले उषा मंगेश्करसँग नेपाली चलचित्र ‘माइतीघर’मा गीत गाएका थिए । यस्तै उनले आशा भोस्लेसँग ‘मायालु इन बम्बे’ नामक चलचित्रमा पनि स्वर दिएका छन् ।
सन् १९५२ मा प्रेमध्वजले १६ वर्षकै उमेरमा ‘याद कसैको आइरहन्छ यो अन्धेरी रातमा’ बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए ।
प्रधानका यो नेपाली शिर उचाली, पर लैजाऊ फूलहरु, घुम्तीमा नआऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौंलगायतका दर्जनौं गीत चर्चित छन् ।
पाल्पामा जेठ ४ गतेसम्म निषेधाज्ञा, आइतबारदेखि बैंकसमेत बन्द हुने
पाल्पा : पाल्पामा निषेधाज्ञा एकसाता थप गरिएको छ। बिहीबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले दोस्रो चरण अन्तर्गत निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरेको हो।
यसअघि जारी गरिएको समय शुक्रबार (भोलि) राति १२ बजेदेखि सकिदै छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि जेठ ४ गते मंगलबार राति १२ बजेसम्म कायम रहने पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। थप गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधिमा पहिलो चरणको भन्दा कडाइ गरिने उनले वताए।
खाद्य पसल दैनिक दुई घण्टा मात्र खुला रहने छन्। बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म पसल खुला रहने उनले बताए। यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेत पूर्णरूपमा बन्द रहने छन्। विवाहमा १५ जना मात्र जन्ती जान पाउने छन्। १५ जनाभन्दा बढी मलामीसमेत जान नपाइने प्रजिअ पाण्डेले बताए।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ का संक्रमितको संख्या पाल्पामा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाउनु परेको हो। जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको उनले बताए। यो सयमा अत्यावश्यक काम बाहेक कुनैपनि मानिस घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। उनका अनुसार औषधि उपचार तथा अत्यावश्यक कामका लागि भने रोकावट हुने छैन्।
औषधि पसल चौविसै घण्टा खुला रहने छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा, संचार, विद्युत, खानेपानी, दमकल बाहेक अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा बन्द रहने छन्।
यस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा पशुपंक्षीका दाना, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा मासु, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय जान आउन प्रयोग गर्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू संचालन हुन पाउने प्रशासनले जनाएको छ।
यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइएको छ। पाल्पा जिल्ला भएर अन्य जिल्ला जाने सवारी साधनले पाल्पाका कुनै पनि ठाउँमा यात्रु चढाउन वा ओराल्न पाउने छैनन्।
आदेशको उल्लंघन गर्ने जो कसैलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर कोरोना महामारीबाट आफू बाँच्न र अरूलाई पनि बचाउँन प्रजिअ पाण्डेले अपिल गरे।
पाल्पामा बिहीबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या दुई हजार आठ सय ९६ पुगेको छ। जसमध्य सात सय ५७ सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यि मध्य ३७ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सात सय २० जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। दुई हजार ९५ जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगेको छ।
किरण गुरुङको अपिल : हठ त्यागौँ, मिलन बिन्दु खोजौँ
२३ पोखरा :
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले पार्टी एकताको बिन्दु खाेज्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टी फुटको संघारमा पुगेका बेला शिर्ष नेताहरूलाई गुरुङले हठ त्यागेर एकता पार्टी एकता जोगाउनुपर्नेमा जाेड दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘इख र बदलाको भावना त्यागाैँ, आफ्नाे भित्र एक अर्कालाई आराेप प्रत्यारोपण र निषेधको राजनीति छाडाैँ।’
​उनले शिर्ष नेताहरूलाई पार्टी एकढिक्का बनाउने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले एमाले पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन एक जनाले मात्रै यहाँसम्म नल्याएको समेत बताएका छन्।
हामी किन बुझ्दैनाैँ? हठ त्यागाैँ, अहमता त्यागौँ, म मात्रै सही छु भन्ने विचार छाडाैँ। पार्टी एकताबद्ध बनाउने मिलन बिन्दु खाेजाैँ उनले लेखेका छन्, आफू पनि डुब्ने अरूलाई पनि डुबाउने खेल नखेलाैँ।’
उनले पार्टी एकतालाई जोगाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने सबैलाई अपिल समेत गरेका छन्।
गण्डकीमा २७ गते मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन
मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अड्किएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक २७ वैशाखमा बस्ने भएको छ। १५ वैशाखमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने निर्धारित कार्यसूची हुँदाहुँदै सभामुखले अनिश्चितकालीन स्थगन गरेका थिए। त्यसपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध चिसो भएको थियो।
प्रदेश सभामा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गतेलाई सभाको बैठक डाक्ने सहमति जुराएको हो। यसअघि संसदीय दलका नेताहरुको बैठकले परामर्श समितिबाट बैठक टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो।
त्यस दिन अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजनसमेत गर्ने सहमति भएको जानकारी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दिए। उनले भने, ‘बोल्न बाँकी नेताहरुले बोल्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीज्यूको प्रतिनिधिले बोल्नुहुन्छ।’ त्यसपछि मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी सभामुख अधिकारीले दिए।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद कुमार खड्का अनुसार १५ गते जहाँ रोकिएको हो, त्यहींबाट अघि बढ्ने गरी सहमति भएको छ। उक्त दिन केही सांसदले अविश्वास प्रस्तावका पक्ष÷विपक्षमा आफ्ना भनाइ राख्दै थिए। केही बेरको स्थगनपछि सभामुखले एकजना सांसद अनुपस्थित भएको कारण जनाउँदै मत विभाजनको प्रक्रिया अघि नै अनिश्चतकालीन अन्त्य गरेका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि उनकै पार्टीकै सांसद पियारी थापाले शाहीको अवस्था थाहा नहुँदासम्म संसद चल्न रोकिनुपर्ने मागसहित निवेदन गरेकी थिइन्। सोही निवेदनका आधारमा सभामुखले संसद स्थगन गरेका थिए। शाही भने सोही दिन कोभिड संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएको सार्वजनिक भएको थियो।
अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुनुअघि संसदको २७ गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राजमो कृष्ण थापा, जसपाका हरिशरण आचायले भनाइ राख्नेछन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री वा उनका प्रतिनिधिले जवाफ दिनेछन्।
अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदाकै दिन २ वैशाखमा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। ‘सोही अनुसार पनि १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘त्यो भनेको जेठ १ हो, हामीले २४ गते नै बैठक बसौं भन्याथ्यौं, सभामुखले २८ गते भन्नुभयो, एमालेका साथीहरुले बीचको मिति २७ रोज्नुभयो र २७ गतेको सहमति भयो।’
यसअघि एमालेले अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने आधारमा सभामुखले संसद स्थगित गरेको भन्दै अर्को बैठकको मिति तोक्न मानेको थिएन। सभामुखले माफी माग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले समेत बताएका थिए।
आफूहरुको सांसद पनि हराएको भन्दै निवेदन दिने र त्यसै आधारमा फेरि संसद अनिश्चितकालीन स्थगित गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ थियो। तर बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने एमालेका प्रतिनिधिले समेत २७ गतेको बैठकमा सहमति जनाएका हुन्।
गण्डकीमा सत्तारुढ एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ गरी २८ सांसद मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा छन्। राजमोको केन्द्रले समर्थन फिर्ता भने पनि यहाँको संसदीय दलले फिर्ता लिएको छैन। केन्द्रले यहाँका सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देश गरेको छ। संसदमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जसपाका २ सांसद छन्।
कोरोना संक्रमणबाट पूर्वमन्त्री पहाडीको मृत्यु
२३ बैशाख : कोरोना संक्रमणबाट पूर्वमन्त्री मोतिप्रसाद पहाडीको मृत्यु भएको छ। सक्रमण देखिएपछि घर मै होम आइसोलेशनमा बसेका ७८ वर्षीय पहाडीको हिजो नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको गएराति नै मृत्यु भएकाे जिल्ला अस्पताल बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज वलीले जानकारी दिए।
डोल्पा घर भएका पहाडि पछिल्ला दिनहरुमा नेपालगन्जमा बसोबास गर्दै आएका थिए।
पहाडी २०३८ सालमा सूर्य बहादुर थापाको मन्त्री मण्डलमा निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री बनेका थिए। २०५२ सालको शेर बहादुर देउवा मन्त्रिमण्डलमा पनि पहाडी मन्त्री बनेका थिए।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी २०५१ सालमा टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार भई चुनाव जितेका थिए। पछि कांग्रेस प्रवेश गरी २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पहिले कानुन राज्यमन्त्री, पछि वन तथा भू संरक्षण र आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए।
२३ बैशाख : मुलुकमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वैशाख ७ देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा ५६ जिल्लामा पुगेको छ। त्यसमध्ये ४१ जिल्लामा पूर्ण र १५ जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ।
बुधबार साँझसम्म ५६ जिल्लामा निषेधको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो तथ्यांकमा दोलखामा जिल्ला भर र इलाम, धनकुटा र सिन्धुपाल्चोकमा केही ठाउँमा निषेध आदेश जारी गरिएको मन्त्रलायले जनाएको छ । त्यस्तै आदेश जारी भएका अन्य जिल्लामा म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, बारा, सिरहा, र नवलपरासी पश्चिम रहेको छ । त्यसमध्ये तनहुँ र म्याग्दीमा क्षेत्र तोकेर आंशिक आदेश जारी भएको छ।
नवलपरासी पश्चिममा बुधबारदेखि आदेश लागू भइसकेको छ भने म्याग्दी, मुगु र तनहुँमा बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू भएको छ। बारा र सिरहामा आज बिहान ६ बजेदेखि लागू भएको छ।
सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ। अहिले बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ र गुल्मीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
यस्तै प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र बैतडी, नुवाकोट, धनुषा, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, अर्घाखाँची र रोल्पामा पनि आदेश कार्यान्वयनमा छ । त्यसमध्ये बाग्लुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, कालिकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तनहुँ र म्याग्दी आंशिक निषेधाज्ञा छ।
आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान बन्द
२३ बैशख : अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान आजदेखि बन्द हुने भएको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आज राति १२ बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आजदेखि बैशाख मसान्तसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
आन्तरिक उडान भने बैशाख २१ गते राति देखि नै रोकिएका छन्। अत्यावश्यक पर्दा आन्तरिक तथा बाह्‍य चार्टर उडान हुने भएको छ।
हिजो मात्रै आन्तरिकतर्फ दुई जहाज कम्पनी तथा १० हेलिकप्टर कम्पनीले ४१ उद्धार उडान गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने डब्ल्युएचओको प्रस्तावमा अमेरिकाको समर्थन
काठमाडौं : कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को प्रस्तावमा अमेरिकाले समर्थन जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्रेटिक सांसद र १ सयभन्दा बढी अन्य देशको दबाबपछि डब्लुएचओको प्रस्तावमा अस्थायी समर्थन दिएका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले बौद्धिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि अमेरिका दृढ रहेको भन्दै कोरोना महामारीपछि पुनः यो अधिकारका लागि आफूले पहल लिने बताएका छन्। तर अमेरिकाको समर्थनपछि पनि खोप उत्पादक कम्पनीहरु भने सहमत भइसकेका छैनन्।
भारत र दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले खोपको प्रतिलिपि अधिकारका कारण पर्याप्तमात्रामा खोप उत्पादन गर्न नसकिएको बताएका थिए। उनीहरुको यो मागलाई डब्ल्युएचओले समर्थन गर्दै औषधि उत्पादक तथा अमेरिकासँग प्रतिलिपि अधिकार छुटको माग गरेको थियो।
दक्षिण कोरियामा फाइभ जी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४० लाख पुग्‍यो
व्यवसायिक रूपमा फाइभ जी इन्टरनेटको सुरुवात गर्ने विश्वको पहिलो देश दक्षिण कोरियामा यसका प्रयोगकर्ताको संख्या झण्डै डेढ करोड पुगेको छ । दुई वर्ष अगाडि सुरु भएको फाइभ जी नेटवर्कका प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४० लाख नाघेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
दक्षिण कोरियाको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार मार्चको अन्त्य सम्ममा मुलुकमा फाइभ जी प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४४ लाख ८० हजार पुगेको हो । जुन दक्षिण कोरियाको कूल मोबाइल प्रयोगकर्ताको २० प्रतिशत हो । दक्षिण कोरियामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ७ करोड ११ लाख छ ।
सबैभन्दा अत्याधुनिक इन्टरनेट नेटवर्क फाइभ जी लाई व्यवसायिक रुपमा सुरुवात गर्ने पहिलो मुलुक दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ को अप्रिल महिना देखि फाइभ जी सेवा सुरु गरेको थियो ।
दक्षिण कोरियाका प्रमुख मोबाइल फोन सेवा प्रदायकहरुले फाइभ जी सेवा उपलब्ध गराएका छन् । प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक एसके टेलिकमका फाइभ जी प्रयोगकर्ताको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६७ लाख ४० हजार छ । त्यस्तै अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक के टी कर्पका फाइभ जी सब्सक्राइबर्र्सको संख्या ४४ लाख तथा एलजी युप्लस कर्पका फाइभ जी सब्सक्राइबरको संख्या ३३ लाख ३० हजार छ ।
दक्षिण कोरियामा फाइभ जी प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहँदा फोर जी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । गत महिनाको तथ्यांक अनुसार दक्षिण कोरियामा फोर जी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ५ करोड ११ लाख ८० हजार छ । जुन त्यसको अघिल्लो महिनाको तुलनामा अढाई लाखले कम हो ।
यद्यपि दक्षिण कोरियाका कूल मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ७२ प्रतिशतले अझैपनि फोरजी नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सामसुंगले केही महिना अगाडि बजारमा ल्याएको ग्यालेक्सी एस २१ सिरिजका कारण फाइभ जी प्रयोगकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ ।
वैशाख, काठमाडौँ । व्यवसायिक रूपमा फाइभ जी इन्टरनेटको सुरुवात गर्ने विश्वको पहिलो देश दक्षिण कोरियामा यसका प्रयोगकर्ताको संख्या झण्डै डेढ करोड पुगेको छ । दुई वर्ष अगाडि सुरु भएको फाइभ जी नेटवर्कका प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४० लाख नाघेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव
२३ बैशाख बुटवल : बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको छ । विहीबार बिहान लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर बिष्णु गौतमले अक्सिजनको अभाव हुन थालेको बताएका हुन् ।
बुधबार साँझ ६० वटा सिलिन्डर झारिएकोमा अब १० वटा मात्रै जडान गर्न बाँकी रहेको बताउँदै त्यसले आज दिउँसोसम्म मात्रै पुग्ने डाक्टर गौतमले बताए । कोरोना बिशेष अस्पतालमा दैनिक १ सय ५ सिलिन्डरले थेग्दै आएकोमा अहिले माग बढेर ५ सय सिलिन्डर पुगेको बताउँदै उनले आपुर्ति कम हुँदै गएको समस्या सुनाए ।
‘सिडिओसावलाई जानकारी गराइएको छ । प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री ज्यु पनि भर्खरै हुनु भएकोले अलमलको अवस्था छ ,’ डाक्टर गौतमले भने –‘दाङ्गमा एक हप्ताअघि अक्सिजनको अभावमा भयावह स्थित आएको थियो । अब बुटवलमा पनि त्यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। ’
विरामीहरु बेड अभावमा भुईँमा लडिरहेको दृश्य शब्दमा चित्रण गर्न नसक्ने डाक्टर गौतमले बताए । उनले रकम अभावका कारण बुटवल धागो कारखानाको आइसोलेसनका संक्रमितहरुलाई अस्पतालले खान खुवाउन नसकेर बुधबार सामाजिक संघ संस्थासँग गुहार माग्नु परेको बताए ।
‘गत वर्ष अस्पताल आफैले त्यहाँ उपचार गराएका संक्रमितलाई खान खुवाएको थियो । त्यसको बिल भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयले आनाकानी गरिरहेकोले तिर्न नसकेर यसपाली संक्रमितका परिवारले खुवाउनुस् भन्न बाध्य छौं,’ डाक्टर गौतमले भने ।
उनले रकम ब्यवस्थापन हुन सके अस्पताल भित्रै पनि दैनिक २० वटा सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बताए ।
दीपिका पादुकोणलाई कोरोना संक्रमण
२३ वैशाख काठमाडौं : भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाई कोरोना संक्रमण भएको छ।
हाल बेंगलुरुमा आफ्नो माइतीमा रहेकी दिपीकामा पिता प्रकाश पादुकोणसहित आमा र बहिनिलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो।
दीपिकाका पितालाई भने श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। प्रकाश पादुकोणका नजिकका साथी एवं उनका एकेडेमीका निर्देशक विमल कुमारले प्रकाशको स्वास्थ्य अहिले ठिक रहेको बताएका छन्। उनले प्रकाशको केहिदिनमै डिस्चार्ज हुने बताएका छन्।
दीपिका कोरोना संक्रमित भएकी पछिल्लो बलिवुड सेलिब्रेटी हुन्। यस अघि बलिवुडका कैयौं सेलिब्रेटी कोरोनाको चपेटामा परेका थिए। जसमा आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, कट्रिना कैफ, विक्की कौशल लगायत छन्।
रियल म्याड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा
२३ वैशाख काठमाडौं : चेल्सी युइएफ़ए च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ
गएराति सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगको दोस्रो सेमिफाइनलमा चेल्सीले रियल म्याड्रिडलाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै समग्रमा ३-१ को जित निकाल्दै फाइनलमा पुगेको हो। यस अघि सेमिफाइनलको पहिलो लिगमा दुबै १-१ गोलको बराबरीमा रोकिएका थिए।
चेल्सीको जितमा टिमो वेर्नर र मासन माउन्टले एक एक गोल गरेका थिए। वेर्नरले खेलको २८औ मिनेटमा गोल गरे भने माउन्टले ८५औ मिनेटमा गोल गरेका थिए।
योसँगै चेल्सी तेस्रो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ। यस अघि २००८ मा फाइनलमा पुगेको चेल्सी म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग पराजित हुदै उपविजेतामा चित्त बुझाएको थियो भने दोस्रो पटक २०१२ मा फाइनल पुग्दै बायर्न म्युनिखलाई पराजित गरेर उपाधि जितेको थियो।
चेल्सीका प्रशिक्षक टोमस टुचेलले लगातार दोस्रो सिजन प्रशिक्षकको रुपमा च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुगेका छन्। उनी अघिल्लो सिजनमा पिएसजीको प्रशिक्षकको रुपमा फाइनलमा पुगेका थिए। उनी दुई फरक क्लबबाट लगातर च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुग्ने पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन्।
अब फाइनलमा उपाधिका लागि चेल्सीले प्रिमियर लिगकै क्लब म्यानचेस्टर सिटीको सामना गर्ने भएको छ। सिटीले यस अघि पिएसजीलाई पराजित गर्दै क्लबको इतिहासमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। फाइनल खेल मे २९ मा हुने छ।
२३ वैशाख बागलुङ : धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारत दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको छ।
एक जना कोरोना संक्रमित र एक जना संकास्पद संक्रमितको मृत्यु भएको हो बागलुङ नगरपालिका–४ का ७८ वर्षीय पुरुषको बिहीबार बिहान अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ।
वैशाख २० गते स्वास प्रस्वासमा समस्या भएर अस्पताल पुगेका उनमा सोही दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती व्यक्तिमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत समस्या रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरे बताए।
स्वास प्रस्वासमा समस्या आएर बुधबार अस्पताल भर्ना भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ का ३३ वर्षीया पुरुषको बुधबार राति नै मृत्यु भएको छ। सघन उपचार कक्षमा उनको उपचार भैरहेको थियो।
अक्सिजनको मात्रा निकै घटिसकेको अवस्थामा अस्पताल आइपुगेका उनको पीसीआर जाँचका लागि थ्रोट स्वाब लिन समेत नभ्याइएको अस्पतालले जनाएको छ बागलुङमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ।
गोरु काटेको अभियोगमा पोखराबाट दुईजना पक्राउ
२३ वैशाख पर्वत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले गोरु काटेको अभियोगमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवास हमालका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ लामागाउँका ८४ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ र सोही वडाको धारापानीका ५० वर्षीय गङ्गाबहादुर गुरुङ हुन्‌।
पोखरा महानगरपालिका–१८ पिपलडालीमा गोरु काटिरहेको भन्ने सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट गएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
गोरुको टाउको, मासु र मासु काट्न प्रयोग हुने हतियारसहित पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जिल्ला अदालत कास्कीबाट आठ दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
चितवनको माडीमा कोरोना संक्रमितले गरे झुण्डिएर आत्महत्या
२३ वैशाख, चितवन । चितवनको माडीमा एकजना कोरोना संक्रमित युवकले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रमुख झलक पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार माडी नगरपालिका वडा नं. ३ बगैचा टोलका ३५ वरषीय युवकले गएराति घर पछाडिको गोठमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । उनलाई गोठमा आइसोलेनसमा राखिएको थियो ।
यही वैशाख १२ गते भारतमा भएको भान्जीको बिहेमा सहभागी भएर १३ गते माडी फर्किएका उनमा तीन दिन अगाडि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनलाई झाडापखलासमेत लागेको जनाइएको छ ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि अहिले माडी नगरपालिकाका प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधिसहित शवको पोष्टमार्टम एवम् व्यवस्थापनबारे छलफल भैरहेको छ ।
बुधबार, बैशाख २२, २०७८
२२ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा थण्डर्सलाई पराजित गर्दै धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिग (एनएसल) को प्लेअफमा पुगेको छ त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको खेलमा वैकल्पिक खेलाडी दर्शन गुरुङको निर्णायक गोलको मद्दतमा धनगढीले पोखरालाई १-० ले पराजित गरेको हो ।
जितपछि ५ खेलबाट १० अंक जोडेको धनगढी अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । धनगढीले अब लिगमा एक खेल खेल्न बाँकी छ । उक्त खेलमा जस्तो नतिजा आएपनि धनगढी शीर्ष चारमा रहने पक्का छ ।
लिगमा शीर्ष दुईमा रहन सके धनगढीले प्लेअफमा फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ । धनगढीले ५ मध्ये ३ खेल जित्दा एक खेल बराबरी खेलेको थियो । यस्तै एक खेलमा पराजित भएको थियो ।
लिगमा दोस्रो हारपछि ५ खेलबाट ५ अंक मात्र जोडेको पोखरा पाँचौ स्थानमा छ र प्लेअफ पुग्ने सम्भावनामा धक्का लागेको छ । शीर्ष चारमा पर्न पोखराले अब आफ्नो अन्तिम खेल जित्दै अन्य खेलको नतिजा समेत कुर्नुपर्नेछ ।
पहिलो हाफमा पोखराले राम्रो खेले पनि गोल गर्न सकेन । ६८ औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले गोल गर्दै धनगढीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पोखराका मानबहादुर तामाङले क्लियर गर्न खोजेको बलमा दर्शनले हाफ भलिमार्फत उत्कृष्ट गरे ।
दर्शन ३७ औं मिनेटमा नाइजेरियन खेलाडी ओलावाले आफिज घाइते भएपछि उनको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए ।त्यसपछि खेलमा थप गोल नहुँदा दर्शनको गोल नै धनगढीलाई ३ अंक दिलाउन निर्णायक बन्यो ।
विजेता टिम धनगढीका अशोक खवास इमर्जिङ प्लेअर अफ दि म्याच बने । उनले नगद १० हजार प्राप्त गरे । यस्तै खेलको म्यान अफ दि म्याच बन्दै धनगढीका कप्तान किरण चेम्जोङले नगद २५ हजार प्राप्त गरे ।
२२ वैशाख मोरङ — प्रदेश १ सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कार्यमा खटिनेको मृत्यु भए परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कोभिड उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सफाइकर्मी र कर्मचारीहरूका परिवारलाई क्ष्ँतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण अस्पतालको कोभिड वार्डमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सफाइकर्मी र कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । ‘चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मी तथा कर्मचारीहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई बिरामी भएमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिएको छ,’ राईले भने, ‘उहाँहरू संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई घरबाहिर संस्थागत वा होटल आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्रदेश सरकारले बेहोर्छ ।’
कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिमको होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने भएको छ । चालक, सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगीका साथै व्यवस्थापनमा खटिने अन्य कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरेको खाना तथा खाजासहितको क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । क्षतिपूर्ति, उपचार, जोखिम भत्ता तथा क्वारेन्टाइनबापतको खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्ने बैठकले निर्णय गरेकाले सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
२२ वैशाख काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये २४ घण्टामा ५८ जनाको मृत्यु भएको हो । यसअघि मंगलबार २४ घण्टामा ५५ जनाको मृत्यु भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा २० हजार ७५६ जनाको पीसीआर गर्दा ८ हजार ६०५ जना र ६१६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५४ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो ।
कुल २१ हजार ३७२ जनाको परीक्षण गर्दा ८ हजार ६५९ जनामा संक्रमण भएको हो । योसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६६ हजार ३५२ जना रहेका छन् । संक्रमितको कुल संख्या भने तीन लाख ५९ हजार ६१० पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा १९ सय ९३ जनाले कोरोना जितेका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या दुई लाख ८९ हजार ७८३ पुगेको छ ।
२४ घण्टामा संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । मंगलबार ७ हजार ६६० जना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
२२ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई ७९ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १२ वटै जिल्लाका डीसीसीएमसीलाई कुल ७९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
जसमध्ये कोभिडबाट बढी प्रभावित रुपन्देही र बाँके जिल्लालाई १०–१० लाख, कपिलवस्तुलाई ८ लाख, नवलपरासी, दाङ, बर्दियालाई ७– ७ लाख तथा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा प्युठान र पुर्व रुकुमलाई ५–५ लाख रुपैयाँ दिइने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
यस्तै वैठकले प्रदेश सरकारले जेठ ६ र ७ गते गर्ने भनिएको प्रदेश लगानी सम्मलेन आगामी कात्तिक २७ र २८ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२२ वैशाख, पोखरा । स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका–११ का ५० वर्षीय पुरुषमा शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । होम आइसोलेसनमा बसेका उनलाई आइतबार एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भयो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड आइसोलेसन सुरु भएको एक दिनमात्र भएको थियो । बेडको अवस्था बुझेर बिरामीलाई गल्याङदेखि प्रतिष्ठानको कोभिड उपचार केन्द्रमा पुर्‍याइयो ।
अस्पताल ल्याइपुर्‍याउँदा अक्सिजन लेभल ७२ प्रतिशत थियोे । उपचारका क्रममा सुधार आएपनि मंगलबार राति एक्कासी अक्सिजनको लेभल घट्यो । कोभिड निमोनियाका कारण आइसोलेसनमा उपचारका क्रममै मंगलबार राति उनको मृत्यु भयो ।
कोभिडको दोस्रो लहरमा ठीक भए भनेका बिरामीलाई कतिबेला के हुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन,’ प्रतिष्ठानका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बराल भन्छन् । उनकाअनुसार दोस्रो लहरमा ४०/५० उमेर समूहका संक्रमितहरु पनि अस्पताल आउनु परेको छ र अधिकांशलाई अक्सिजनको सपोर्ट दिनु परेको छ । ह्वात्तै अक्सिजनको मात्र कम हुँदा कतिपयलाई अस्पताल पुर्‍याउन समेत भ्याइँदैन ।
१९ गते गण्डकीमा ८ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए । भोलिपल्ट चार जनालाई कोरोनाले नै ज्यान लियो । बुधबार स्याङ्जा र पर्वतका दुई जनाले ज्यान गुमाए । डा. बरालका अनुसार पहिले लहरमा कोरोनाले धेरै दीर्घरोगीको ज्यान लिएको भएपनि अहिले २० देखि ४०/५० वर्ष उमेर समूहका मानिस बढी प्रभावित भएका छन् ।
पाँच दिनमा भरियो कोभिड उपचार केन्द्र
पहिलो लहर कम भएर बन्द गरिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड आइसोलेसन पाँच दिनअघि मात्र पुनः सुचारु गरिएको हो । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भरिभराउ भएपछि त्यहाँका दुई जना गम्भीर बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार थालिएको आइसोलेसन केन्द्र अहिले भरिइसकेको छ । डा. बराल भन्छन्, ‘५० बेड क्षमताको आइसोलेसनमा ४८ जना बिरामी पुगिसकेका छन् र बेड खोज्नेहरुको फोन आउन छाडेको छैन ।’
उनका अनुसार त्यहाँ उपचाररत करिब ९५ प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजन सपोर्ट दिनुपरेको छ । ‘यसबाटै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो कति भयावह छ,’ डा. बराल भन्छन् । प्रतिष्ठानमा अहिले दैनिक ६० सिलिन्डरसम्म अक्सिजन खपत भइरहेको छ, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । उनका अनुसार बेडको खोजीमा बुटवल, दाङदेखिबाट समेत फोन आउने गरेको छ । तर उनलाई भने संक्रमितको संख्या बढेसँगै पोखराकै चाप धान्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । ‘अहिले धेरै जना अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको अवस्थामा अस्पताल आउनुहुन्छ । धेरैमा यस्तो समस्या देखिन थाल्यो भने थेग्न सक्दैनौं,’ डा. बरालले भने ।
कोरोनाको पहिलो लहर सकिएर दोस्रो लहर शुरु भइसक्दा पनि सरकार र सरोकारवाला गम्भीर नहुँदा अहिले पनि पूर्वाधार तयार नभएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेलैमा सोचेर आइसोलेसन बनाउने काम गरेको भए अहिले ठूलो समस्या नआउने प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचन बताउँछन् ।
कोरोनाले भयावह अवस्थाको संकेत गरेपछि मात्र सरकार झस्किएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘दिनानुदिन कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा अक्सिजन पनि एकदमै आवश्यक रहन्छ । छिटोभन्दा छिटो आइसोलेसन कक्षहरु विस्तार र बेडहरु बढाउनुपर्ने अवस्था छ,’ डा. बरालको सुझाव छ, ‘हामीलाई चुनौती पनि छ । एकातिर कोभिड बिरामीको पनि उपचार, नियमित उपचार सेवा गरिराख्नुपर्छ । थोरै मानव संशाधनले सबैतिर भ्याउनु परिरहेको छ ।’
गण्डकीमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण दर
सरकारी तथ्यांकमा गण्डकी प्रदेशमा १९ वैशाखमा एकै दिन ५७६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको थियो । तर शुक्रबार र शनिबारको समेत गरी आइतबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक थियो । तर, बुधबार गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दरले अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बुधबार एकैदिन ५७४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ३१ जना पुगेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सुरु भएयता सक्रिय संक्रमितको संख्या यति ठूलो पहिलो पटक रेकर्ड कायम भएको हो,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले भने, ‘अवस्था धेरै भयावह हुने बाटोमा छ । यो डरलाग्दो संकेत हो ।’
गण्डकीमा सबभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला कास्की हो । बुधबार मात्र कास्कीमा २९२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । योसँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १८०१ छ । बागलुङ सक्रिय संक्रमितको संख्या २७४ पुगेको छ । पहिलो लहरमा बढी प्रभावित भएको नवलपुरलाई अहिले २४१ जना संक्रिय संक्रमित छन् । स्याङ्जामा २१८ जना सक्रिय संक्रमित छन् । गण्डकीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट २३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
सोमवार, बैशाख २०, २०७८
काठमाडौं । नेपालमा एकैदिन ३७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ जनाको मृत्यु भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोनाबा मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर गरिएको १६ हजार ६ सय ५८ पीसीआर परीक्षणमा ७ हजार ३ सय ८८ जना र ५ सय १८ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ६० जना गरी कुल ७ हजार ४ सय ४८ जनाका कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या ३ लाख ४३ हजार ४ सय १८ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार १ जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या २ लाख ८६ हजार १५ पुुग्यो । यस्तै देशभर ५४ हजार ४१ जना सक्रिय संक्रमित हुँदा २ सय १२ जना क्वारेन्टिमा छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये ५ सय ७८ जना आईसीयूमा रहँदा १ सय ४२ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
photo : adarsha samaj
पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिता पौडेललाई नियुक्त गुर्नभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको सिफारीसमा भण्डारीले पौडेललाई नियुक्त गर्नुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेशप्रमुख संगै सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मीला कुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरेर गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको हो ।
दुवै प्रदेशमा माओवादी निकटका प्रदेश प्रमुख थिए ।
प्रदेश प्रमुख सिता पौडेल
गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त
काठ्माण्डौ । सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सिता पौडेललाई नियुक्ति गर्न सिफारीस गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गङ्गाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
यसअघि गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमकी प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त पदमुक्त भएपछि उहाँहरूको ठाउँमा पौडेल र यादवलाई नियुक्त गरिएको हो ।
दुवै प्रदेशमा माओवादी निकटका प्रदेश प्रमुख थिए । प्रदेश प्रमुखका कारण गण्डकीमा एमाले सरकारले मनपरी गर्न नपाएको र सुदूरपश्चिममा माओवादीको सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको सरकारका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घट्यो
सोमबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ ।
आइतबार ५४ अंक्ले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार १२ दशमलव ३६ अंकले घटेर २ हजार ६ सय ५२ अंकमा झरेको छ ।
कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ । एक करोड ५९ लाख ८ हजार ४ सय ९९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम ७ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ९० हजार १ सय ४६ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।
दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकका एजेन्डा खुलाइएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक हिजो पनि बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले दिउँसो साढे ३ बजे देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको छ ।हिजो पनि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक आज पनि बस्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उसो त मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक भने सोमबार नै बस्ने गरेको छ ।
हिजोको बैठकले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने, सरकारले विश्वासको मत लिने, आन्तरिक हवाइ उडान बन्द गर्ने तथा राष्ट्रिय जनगणना स्थगित गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयपछि देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
दिउँसो साढे ३ बजे कोभिड–१९ महामारी र समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्न लागिएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
पछिल्ला केहीदिनयता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने भनिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
त्यस्तै सत्ता स्वार्थले महामारी नियन्त्रणको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणीहरु पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक राजनीति र कोभिड(१९ का विषयमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको अर्को बैठक अझै लम्बिने
गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको अर्को बैठक अझै लम्बिने भएको छ ।
सोमबार बसेको कार्यव्यस्था समितिको बैठकले सबै दलको नेताको बैठकले मात्र टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।
दलको नेताहरूको बैठक कहिले बस्ने भन्ने समय टुंगो लागेको छैन । दलका नेताहरूको बैठक भोलि बस्ने र त्यसपछि मात्र बैठकको मिति टुंग्याउने निर्णय भएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित
कोरोना महामारीका कारण आगामी राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको आफुले पनि सुनेको जानकारी दिँदै लिखित रुपमा चिठी भने आइनसकेको बताए ।
१२औं जनगणना आगामी जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी थियो। हाल देशभर सुपरिवेक्षकको तालिम चलिरहेको छ।नेपालमा वि।सं। १९६८ देखि हरेक दस–दस वर्षमा जनगणना हुने गरेको छ।
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमण बाट तीन हजार ४१७ को मृत्यु
भारतमा कोरोनाभाइरस ९कोभिड–१९० को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ४१७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टाको अवधिमा तीन लाख ६८ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । यो सहित भारतमा कूल संक्रमितको संख्या एक करोड ९९ लाख पुगेको छ ।
गत शनिबार दैनिक संक्रमितको संख्या चार लाख नाघेको थियो तर आइतबार केही कमी आएको छ । भारतमा कोभिड संक्रमणबाट हालसम्म दुई लाख १८ हजार ९५९ जनाको ज्यान गएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अझै पनि ३४ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सक्रिय संक्रमितको अवस्थामा छन् । गत २४ घण्टामा तीन लाख व्यक्ति संक्रमणमुक्त भएका छन् । यो सहित भारतमा कूल संक्रमितमध्ये १ करोड ६२ लाख संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार, भारतमा हालसम्म २९ करोड नमुना परीक्षण गरिएको छ । आइतबार मात्र भारतमा १५ लाख नमुना परीक्षण गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा आक्रामक रुपमा कोभिड खोप अभियान सञ्चालन गरेको भारतमा हालसम्म १५ करोड ७२ लाखलाई खोप दिइएको छ ।भारतमा कोभिडको दोस्रो लहरले पूरै देशमा संकटको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्वभर कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३२ लाख १६ हजार नाघेको छ ।कोभिडको संक्रमणबाट संयुक्तराज्य अमेरिकामा ५ लाख ९१ हजार, ब्राजिलमा ४ लाख ७ हजार, भारतमा २ लाख १८ हजार, मेक्सिकोमा २ लाख १७ हजार, बेलायतमा १ लाख २७ हजार, इटालीमा १ लाख २१ हजार, रसियामा १ लाख १० हजार, फ्रान्समा एक लाखको मृत्यु भएको छ ।
गण्डकीमा कोरोना सङ्क्रमण उग्र,४२ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा हेर्नुृहोस अहिलेसम्मको अपडेट
गण्डकी प्रदेशमा आइतबार एकै दिन ५७६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
शनिबारभन्दा संक्रमित संख्या २७४ ले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा संक्रमित संख्या पुगेको हो । पहिलो लहरमा एकदिनमा सबैभन्दा धेरै ३४२ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
आइतबारसम्म प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेको छ । चिकित्सकहरूले कोरोनाको संक्रमण समुदायमा भुसको आगोसरी फैलिएको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ११ सय ९० जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ५७६ जना अर्थात् झण्डै ५० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
गएको २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा प्रदेशको अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या हो । गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २३२ पुगेको छ ।कास्की र पोखरामा पनि कोरोना संक्रमणले उच्च विन्दु छोएको छ ।
कास्कीमा आइतबार ३६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भई सक्रिय संक्रमितको संख्या १३ सय १५ जना पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल संक्रमितमध्ये कास्कीका ६५ प्रतिशत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना संक्रमणबाट २१ जनाको मृत्यु भएको छ । आइतबार मात्रै पोखरामा उपचाररत ८ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । शुक्रबार ३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।गण्डकीमा चैत ३१ गतेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २०७ जना थियो ।
अहिले त्यो संख्या २३२ पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका बिरामीहरूमा छिट्टै सास फेर्न गाह्रो हुने र हाइ फ्लो अक्सिजनको आवश्यक पर्नेको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ५० बेडको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल अहिले भरिभराउ छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० बेडमध्ये २५ बेड भरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा। शर्माले जानकारी दिए ।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा १२३, मेडिप्लसमा ५९ बेड, फिस्टेलले २५ बेड दिने बताएको निर्देशक शर्माले बताए । ‘जहाँ जहाँ कोरोनाको उपचार हुन्छ, बिरामीको उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारले कर्मचारी नै पठाउने तयारी गरेका छौं’ शर्माले भने, ‘कोभिडका बिरामीका कारण अरू बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था नआओस् भनेर पनि सचेत छौं ।’ अब ५० बेडभन्दा साना अस्पतालसँग पनि सहमति गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्यमा समस्या नहुँदासम्म घरमै बस्न प्रेरित गर्ने र बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रन थालेपछि उपचारको पहुँच बढाउनेबारे कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा गएको १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा छ भने अरु २८ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, सुर्खेत, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, बर्दिया र रूपन्देहीमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ । यसअघि ठाउँ विशेषमा निषेधाज्ञा गरिएको बर्दियामा आजदेखि आउँदो ३१ गतेसम्म पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा लागू भएको हो ।
बझाङ र बैतडीमा आज बिहानैदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने अर्घाखाँचीमा आज रातिदेखि निषेधाज्ञा लागू हुनेछ । त्यस्तै सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेल्धुरा, झापा, गुल्मी, प्यूठान, उदयपुर, बझाङ, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी र दैलेखमा पूर्णरूपमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । कास्कीमा निषेधाज्ञा भए पनि जोरबिजोर लगाइएको छ ।
कपिलवस्तु, धादिङ, नुवाकोट र धनुषामा भोलि बिहानदेखि तथा दैलेखमा भोलि रातिदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बाग्लुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रे, गोरखा, बाजुरा, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप र ताप्लेजुङमा ठाउँ तोकेर आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।
कास्कीमा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि जारी निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ । यस अघि जिल्लामा वैशाख १५ गतेबाट २१ गते राति १२ बजे सम्म खुकुलो गरी निषेध आदेश जारी भएकोमा २१ गते बिहान ५ बजेदेखि ३१ गते राति १२ बजे सम्मका लागि थप कडाइ गर्दै कास्की प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि थप गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोद विन्दु शर्माका अनुसार होमआइसोलेसनमा बसेका तथा पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कास्कीका ५, पर्वत, दाङ र रुपन्देहीका एक/एक जना गरी जम्मा ८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो ।
डा. शर्माका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–१६ का ७७ वर्षीय पुरुषको शनिबार मृत्यु भएको हो । वैशाख १६ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी होमआइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए ।
पोखरा महानगरपालिका–२६ की ५८ वर्षीया महिलाको शनिबार मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको उनले बताए । उनीमा वैशाख १५ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसैगरी पोखरा महानगरपालिका–१६ की ७३ वर्षीया महिला र वडा नम्बर–१० की उमेर खुल्न नसकेकी महिलाको शनिबार मेडिप्लस अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डा. शर्माले बताए । ७३ वर्षीया महिलामा वैशाख १२ र उमेर खुल्न नसकेकी महिलामा वैशाख १६ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका–१९ का ५४ वर्षीय पुरुषको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा शनिबार राति मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनीमा वैशाख १८ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ की ७६ वर्षीया महिलाको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचारका क्रममा शनबिार मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनीमा वैशाख १५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका–५ का ४३ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान १ः२२ बजे गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा मृत्यु भएको हो । उनीमा वैशाख १५ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का ७५ वर्षीय पुरुषेको आइतबार बिहान १०ः३० बजे मेडिप्लस अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनीमा वैशाख ९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अन्तत ..पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार पुनः शंकर पोखरेललाई नै बनाउने निर्णय गरेको छ ।
दलका नेता पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय भएको प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले बताए ।दलको बैठक बसेर नयाँ सरकार फेरि शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा बनाउने निर्णय गरेको छ’, उनले भने । पोखरेलले आजै दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४१ सांसद छन् । एमाले बाहेक विपक्षी दलहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि आजबाट छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो ।
तर, त्यसअघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले चार सांसद निस्कासित गरेको फाइदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले उठाएका छन् । आज बसेको दलको बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु पनि सहभागी थिए ।
लुम्बनीमा विष्णु पन्थी र रमा घर्तिमगर नेता नेपाल निकट नेता हुन् । अनलाइन खबर
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आजै सपथ ग्रहण गराउने तयारी भएको एमालेका एक नेताले बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले आजै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने र एमालेले बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा नाम पठाएपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको ती नेताको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एमाले नेता वैजनाथ चौधरीले दाबीका साथ भने, ‘आजै सपथ ग्रहण हुन्छ, धारा बदलिएको मात्रै हो, सरकार बदलिएकै छैन ।’
आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले तत्कालै स्वीकृत गरेका छन् ।
एमालेले लुम्बिनीमा एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेको छ । आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै पोखरेल त्यसको तयारीमा छन् ।
एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीका दुई र जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८१ सांसद छन् । त्यसमध्ये एमालेसँग मात्रै ४१ सांसद छन् जुन बहुमतको एकल सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो ।यरुतैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । कोभिडको महममारी बिच कहिले राजिनामा त कहिले नियुक्ती यसप्रति तपाँको धारणा के छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बाल तथा किशोर कविता प्रतियोगितामा बङ्गलादेशकी इभान्जेलिना बल प्रथम
अन्तर्राष्ट्रिय बाल तथा किशोर कविता प्रतियोगितामा बङ्गलादेशकी इभान्जेलिना बल प्रथम भएकी छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास ) को आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा जापानका अभिनव गिरी द्वितिय भएका छन् भने पोर्चुगलकी मानस्वी खरालले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी छन् ।
विजेता बलले एक हजार डलर, द्वितिय भएका गिरीले पाँच सय डलर र तेस्रो स्थान हात पारेकी खरालले तीन सय डलर पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा अंग्रेजी भाषा कविताको विधातर्फ उत्कृष्ट हुँदै अमेरिकाकी ओजस्वी पसछेले दुई सय डलरको पुरस्कार जितेकी छिन् ।
कार्यक्रमका विजेता सबैलाई प्रमुख अतिथी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले बधाई दिँदै दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अनुशरण एवं प्रवर्धन गर्न विशिष्ट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले एनआरएनए र अनेसास लगायतका संस्थाले अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरसम्भव सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथी पूर्व कुलपति एवं मूल्यांकन समितिका प्रमुख बैरागी काँइला, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्त , एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने र भवन भट्ट, अनेसासका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदी, अनेसास ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै वरिष्ठ साहित्यकारहरू अशेष मल्ल, दिनेश अधिकारी, प्रकाश सायमी र डा बिन्दु शर्माले आ (आफ्ना रचना वाचन एवं शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा अतिथी कविहरू रबिन शर्मा (जापान), हिमान्शु निभा कुँवर (अमेरिका) तीर्थ सङ्गम राई ं (कतार) गणेश खडका (अफ्रिका) इसिका अधिकारी (युरोप) केशव सिग्देल (नेपाल) गोवर्ध्दन पूजा (अमेरिका) र प्रविणा बराल (जापान) ले पनि आ आफ्ना कविता वाचन गरेका थिए ।
आयोजकका तर्फबाट एनआरएनएका पूर्व कोषाध्यक्ष एवम् भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा समितिका अध्यक्ष हिक्मत थापाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको कार्यक्रममा समितिका सहअध्यक्ष महेश्वर पन्तले प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा एनआरएनएका महासचिव डा। हेमराज शर्मा, एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल शाहले शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो । कार्यक्रम संयोजक अनेसासका महासचिव तथा एनआरएनए अमेरिकाका उपाध्यक्ष सर्वज्ञ वाग्लेले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा मूल्यांकन समितिको तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका काव्य विभाग प्रमुख प्रा।डा। हेमनाथ पौडेलले नेपाली भाषाका प्रतियोगी र महेश पौडेलले अङ्ग्रेजी भाषाका प्रतियोगी मध्येबाट पुरस्कृत नामको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
६० जना प्रतियोगी मध्येबाट अन्तिम चरणमा पुगेका कविहरू अभिनव गिरी, अंशु सुवाल, आगत खरेल, इभान्जेलिना बल, गुन्जना न्यौपाने, गङ्गा फुयाल, मानस्वी खराल, समृद्धि नेपाल, सरला बाराकोटी, सौगात पराजुलीले नेपालीमा र ओजस्वी पसछे, मारिया अधिकारी र प्रेमा पौड्यालले अङ्ग्रेजीमा कविता वाचन गरेका थिए ।
एनआरएनएका एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उपसंयोजक पारसमणि पोखरेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता अनेसासका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल ‘माइला’ले गर्नु भएको थियो ।
विपतको यो राष्ट्रिय संकटसंग मुकाविला गर्न सरकारलाई राप्रपाको आग्रह
देश यस वखत कोरोना महामारीको महासंकटमा परेको छ ।
विपतको यो राष्ट्रिय संकटसंग मुकाविला गर्न राष्ट्रको सवै राजनीतिक, आर्थिक, वौद्धिक र प्राविधिक शक्तिहरुलाई एकीकृतगरी प्रभावकारीरुपले तत्काल परिचालन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
संक्रमितहरुको निशुल्क र सहज उपचार हुने व्यवस्था तत्काल मिलाई प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयासद्धारा संसारको कुनै पनि देशबाट कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई सहजरुपले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाइ हाल्ने प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसंग राप्रपा अपिल गरेको छ ।
यस कार्यमा सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग गर्न राप्रपा तयार रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
उपत्यकामा आइतबारदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने
शनिबार, बैशाख १८, २०७८
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप कडाई गरिने भएको छ । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यकाका ३ जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन थप कडाई गर्न लागिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । यसका लागि ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
शनिवार काठमाडौंका सडकमा अनुगमन गर्न निस्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले निषेधाज्ञा प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्दा सडकमा गाडी र मान्छे बढेकोले आइतबारदेखि जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आज शनिवार सडकमा गाडी कम छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन हुँदा सडकमा सवारी चाप बढेको पाइएको छ । भोलिदेखि थप कडा गर्ने विचार गरेका छौँ । सरकारी कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने र गाडी कम चलाउन लगाउन लागिरहेका छौँ शनिवार तथा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारीसाधन गुडेका भए त्यसलाई होल्ड गरिने पनि उनले बताए ।
शनिवार काठमाडौंको सडकको अवस्था र अस्पतालहरूको अवलोकन गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरपालिकाका मेयरसहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले कोराना संक्रमितको उपचारका लागि थप बेड तयार पार्न अस्पतालहरूको पनि अवलोकन गरेको छ ।
काठमाडौंको वीर अस्पतालको ५ सय शैयाको नयाँ अस्पताल भवनको अवलोकन गरेको छ । सो अस्पतालमा बेड राखेर तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । यस्तै काठमाडौंमा निजी क्षेत्रले चलाएको गोर्खा अस्पतालमा पनि कोभिड वार्ड बनाउनका लागि अवलोकन गरेको उनले बताए ।
अस्पतालहरुमा कोभिडका बिरामीको अत्यधिक चाप परेको र बेड मिलाइदिन भन्दै फोन आउने गरेका कारण बेड थप गर्नका लागि अनुगमन गरेको उनले बताए ।
सामाखुसीमा रहेको राधा स्वामीमा तत्काल कोभिड वार्ड बनाउने योजना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए । त्यहाँ अक्सिजन सहितको ८८ बेड, आइसोलेशन सहितको ९६ बेड तयार भइरहेको छ ।
वीर अस्पतालमा भवन बनेको र भौतिक पूर्वाधार पनि रहेकोले त्यसलाई पनि नयाँ कोभिड वार्ड बनाउनेबारे छलफल भएको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड वार्ड तयार गर्ने तयारी थालिएको हो ।
क्षेत्रपाटीमा बन्द अवस्थामा रहेको गोर्खा अस्पताललाई पनि महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा कोभिड उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खाली रहेका अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ । बिल्डिङ बनाउनुपरेन, बेड थपेमात्र पुग्ने भएकोले सहजपनि हुन्छ ।’
उपत्यकामा कहाँ कहाँ खाली अस्पताल छ खोजेर त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोभिड उपचार बेड बिस्तार गर्दै लैजाने उनले बताए ।
२४ घण्टामा ५ हजार ७६३ जनामा संक्रमण पुष्टि : १९ को मृत्यु
काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार ५ हजार ७६३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यो अहिलेसम्मकै उच्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार ५ हजार ७२७ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसअघि नेपालमा २४ घण्टामा सर्वाधिक ५ हजार ७४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा १४ हजार ४०३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा पाँच हजार ७०६ र ५६६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५७ जनामा संक्रमण देखिएको हो।
शनिबार पाँच हजार ७६३ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ४३ हजार २१३ पुगेको छ। कुल संक्रमितको संख्या तीन लाख २८ हजार ८९३ पुग्दा दुई लाख ८२ हजार ३८२ जना डिस्चार्ज भएका छन्।
शनिबार १९ जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ हजार २९८ पुगेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा ६७ जना रहेका छन्।
२४ घण्टामा संक्रमित भएकामध्ये ३२ सय ५१ पुरुष र २४ सय ५५ महिला रहेका छन्। यो अवधिमा १२ सय ८७ जना भने डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमितमध्ये ४०१ आईसीयू र ११० जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइराखेको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा ४३ बेडको आइसोलेसन सेन्टर
१८ वैशाख, काठमाडौं । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा ४३ बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको निर्णयअनुसार बेडहरु तयार पारिएको कलेजका मनोहर खनालले बताए ।
उनकाअनुसार बेडहरु भवन विभागले उपलब्ध गराएको हो भने स्यानिटाइजरलगायत कलेजले उपलब्ध गराउनेछ । कलेजमा १०० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनिएको छ । आवश्यकताअनुसार बेड थप गर्दै लगिनेछ ।
झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण, नर्भिक अस्पताल लगिँदै
१८ वैशाख काठमाडौं : नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
अस्वस्थ भएपछि गरिएको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता खनाललाई अहिले उपचारका लागि काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल लगिँदैछ ।
स्रोतका अनुसार उनको अवस्था सामान्य भएपनि कोरोनाका लक्षण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि नर्भिक अस्पतालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल पनि उपचाररत छन्। प्लाज्मा थेरापी गरिएकी कोमलको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
आजको राशिफल बि.सं.२०७८ साल बैशाख १८ गते शनिवार ई. सं. २०२१ मे १ नेपाल सम्बत ११४१ पोहेलागा पञ्चमी, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायन, बसन्त ऋतु, बैशाख कृष्ण पञ्चमी, चन्द्रमा धनु राशिमा, मूल नक्षत्र सिद्ध योग, कौलव करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०५ः२४ बजे, सूर्यास्त साँझ ६ः३७ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको धनु राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा तिल मुखमा राखेर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ७ बजेर ३ मिनेट देखि ८ बजेर ४२ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ । चिताएको काममा सफलता पाउनु हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन । घरायसी सुखको अनुभूति हुनेछ । साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुनसक्छ ।
बृष इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) सानातिना घरेलु काममै अल्मलिएर समय व्यतीत हुनसक्छ, सचेत रहनु होला । काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ । सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिने छ । गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछन भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा अलि कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ ।
मिथुन का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)मन फुरुङ्ग हुनेछ । हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहने छ । सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिने छ । मनग्ये धनलाभ हुनेछ । व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिने छ । व्यापार–व्यवसायमा लाभ हुनेछ ।
कर्कट हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) आर्थिक क्रियाकलापमा सोचेअनुरूप फाइदा उठाउन सकिन्छ । अनावश्यक वादविवादमा परिएला, विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तर्क र बहसमा पकड भएको राम्रो दिन छ, त्यसैले मान–सम्मानको रक्षा हुनेछ । गरेका काममा देखिएका विघ्नबाधा हटाउन सकिने छ । व्यावसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिने छ ।
सिंह मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन । विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिने छ ।
कन्या टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) अशुभ चन्द्रमाको प्रभाव छ, काम बिग्रने डरले सताइरहने छ । बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइने छ । नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन । महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राख्नुहोला । यद्यपि कृषि तथा पशुबाट लाभ हुने समय छ । बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने छ । चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउनेछ ।
तुला र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको काममा सहयोग लिन/दिन सकिने दिन छ । उद्योग तथा बन्दव्यापारमा प्रशस्त फाइदा मिल्ने समय छ । कमाएको धन सञ्चित हुनेछ वा पारमार्थिक काममा लगानी गरिने छ । पुरानो समस्यालाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्ने छ । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल रहने छ । कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिने छ ।
बृश्चिक तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) भौतिक साधन जुट्नेछन र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ । सम्झौता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाँकेका काममा सफलता आर्जन गर्न सकिने छ । आर्थिक क्रियाकलापले दूरगामी फाइदा हुनेछ । चिन्तन र विचारका बलमा समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन सकिने छ । प्रशंसकहरूले साथ दिनेछन ।
धनु ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) पारिवारिक भेटघाटको समय छ । विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउला । प्रतिष्ठित कामले आत्म–विश्वास बढाउनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ । सहयोगीहरूले सकेको सहयोग गर्नेछन । शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले ताकेको काममा सफलता आर्जन हुनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन । उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने छ ।
मकर भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) सजग र सतर्क भई काम गर्नसके आजको दिन पनि लाभकारी बन्न सक्छ । अरुको पछि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नै सुझबुझ र परिश्रमको भर पर्नु राम्रो हुन्छ । बिग्रन लागेको कामबाट पनि धेरथोर लाभ नै मिल्नेछ । अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुन सक्छ । कडा मिहिनेत र उचित सुझबुझका आधारमा प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ ।
कुम्भ गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन भने गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधनलाई उपयोग गर्न सकिने छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ ।
मीन दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । व्यापारमा फाइदा हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । नाम, दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने छ ।
चिना एवं जन्मकुण्डली निर्माण गर्नुपरेमा, ज्याेतिष सम्बन्धी कुनै जानकारी लिनुपरेमा nepaljyotish.com मा क्लिक गर्नुहाेस ।
कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्ने सम्भावना टर्दै,विद्यालयहरुले आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा दिने तयारी
शुक्रबार, बैशाख १७, २०७८
कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्ने सम्भावना टर्दै गएपछि विद्यालयहरुले आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा दिने तयारी थालेका छन् ।
काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले शिक्षा ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक मूल्यांकनबाट विद्यार्थीको कक्षा उन्नती गर्ने तयारी गरेको बताए ।
पाठ्यक्रम अनुसार सबै कक्षाको पढाइ सकिएकाले परियोजना कार्य, हाजिरी र त्रैमासिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिएको प्रधानाध्यापक कँडेलको भनाइ छ । ‘सबैको पढाइ सकिएको छ । अब फेरि परीक्षा गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएपछि आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा कक्षोन्नती गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
विद्यार्थीलाई परीक्षाको हाउगुजी देखाएर राख्नु भन्दा विद्यालयले परियोजना कार्य, नियमितता र त्रैमासिक परीक्षाको आधारमा मूल्यांकन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुरानो कालीमाटीस्थित ज्ञानोदय माविले भने वैशाख २६ गतेदेखि भर्चुअल परीक्षाको तयारी गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातीकाजी महर्जनले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउन असम्भव हुँदै गएकोले भर्चुअल परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले भने ‘हामीले वैशाख १२ देखि परीक्षाको तयारी गरेका थियौं । एक दिन परीक्षा पनि भयो । तर सक्न पाएनौं । त्यसैले २६ गतेबाट भर्चुअल गर्ने तयारीमा छौं ।’
संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संस्था एनप्याब्सनले भने यो महिनाभर महामारीको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने उपाध्यक्ष एवं परीक्षा समितिका संयोजक प्रवोध रिजालले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यालयले कक्षा ८, १०, १२ बाहेकका कक्षाको परीक्षा विद्यालयले विश्वसनीय र वैद्य हुने हिसाबले लिन सक्ने बताए । कक्षा ८ को परीक्षा भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको परिवेश अनुसार गर्न सक्ने शर्माले बताए ।
एसईई र १२ कक्षाको परीक्षा भने पूर्व निर्धारित समय तालिका हेरफेर नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले एसईई जेठ १३ गतेदेखि र कक्षा १२ को परीक्षा जेठ २६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तय गरेको थियो । ‘अहिलेसम्म एसईई र १२ कक्षाको लागि पूर्व निर्धारित समयअनुसार तयारी भइरहेको छ । केही दिनसम्म अवस्था सुधार हुन्छ वा जटिल हुन्छ त्यसपछि नै निर्णय हुन्छ’ शर्माले भने ।
कक्षा ११ को परीक्षाको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नमुना प्रश्नपत्र तयारी गरिरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । onlinekhabar
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिवेशनहरूको मिति तय
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिवेशनहरूको मिति तय गरेको छ।
वैशाख ६, १० र १२ गते भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सर्कुलर गर्दै एमालेले अधिवेशनको मिति तोकेको हो।पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिकालाई कमिटीले परिमार्जनसहित पारित गरेर अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत् जिल्ला तहमा सर्कुलर गरेको हो।
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको निर्देशनमा असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपां) कार्यकालका पार्टी सदस्यहरु र पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा कायम रहेका पार्टी सदस्यहरुलाई नवीकरणको अवसर दिने, पार्टीमा एकतावद्ध हुने सदस्यहरुको सदस्यता पनि यही अवधिमा नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले विधान संशोधनमा केन्द्रित भएर छलफल एवम् निर्णय गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक २०७८ साउन २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म आयोजना गर्ने अपानिमा उल्लेख छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को २०७७ पुस ७ गते विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य हुने भएका छन्।
बैठकले केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरु, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, विभागका सचिवहरु, जनसंगठनका अध्यक्षहरू, प्रवास क्षेत्रबाट मनोनित कमरेडहरु राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्य हुने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भदौ ५ गते वडा अधिवेशन, भदौ १५ गते पालिका तहका कमिटीहरूको अधिवेशन, ३० गते जिल्ला अधिवेशन र असोज ३० गते प्रदेश तहका कमिटीहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने संगठानात्मक योजना तय गरेको छ। मंसिर २ गते देखि ६ गतेसम्म दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय यसअगाडिको बैठकमा नै एमालेले गरिसकेको छ।
‘पार्टीभित्रको अन्तरविरोध कटुतापूर्ण बन्दै जाने क्रममा गठन गरिएका संगठनात्मक संरचना र तिनको नेतृत्वलाई आमरुपमा यथावत राख्ने ।’ माधव नेपाल समूहलाई लक्षित गर्दै अपानिमा भनिएको छ, ‘ती कमिटीमा अन्तरविरोधको पल्लो किनारामा उभिएका कमरेडहरुलाई पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्काउन अधिकतम पहल गर्ने र त्यसरी फर्किने कमरेडहरुलाई आवश्यकता र योग्यता अनुरुप उपयुक्त जिम्मेवारी दिने ।’(अन्नपुर्ण)
१८ जिल्लामा निषेधाज्ञा, आजबाट थप कडाई,घर बाहिर ननिस्कन गृहको निर्देशन
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले १५ जिल्लामा पूर्ण र तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाएको छ ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बाँके जिल्लाले वैशाख १३ गतेबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश २० गतेसम्म जारी रहने छ ।सुर्खेत जिल्लाले वैशाख १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाएको छ । काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा बिहीबारदेखि वैशाख २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा छ ।
पाल्पा र चितवनमा हिजो राति १२ बजेदेखि निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने सल्यानमा १९ गते बिहान ६ बजेदेखि आदेश कार्यान्वयनमा जाँदैछ ।अन्य कास्की, कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दाङ, रुपन्देही, सल्यान र सुनसरी जिल्लामा भने बिहीबार विहानदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ ।
कालिकोटमा १० गतेबाट, बाग्लुङमा ७ गतेबाट र बर्दियामा १३ गतेबाट निश्चित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका १२, १३, १४ वडा तथा साविक अमलाचौर, पैयूँपाटा र नारायणस्थान क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । कालिकोटमा खाँडाचक्र नगरपालिका ११ को रेङ्गिलमा लागू गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालय आदेशानुसार सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।उपत्यकामा खाद्य सामग्री पसल, ग्रोसरी कक्ष बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म चल्न पाइने छ । imagekhabar
गणतन्त्र अनैतिक भ्रष्ट र ठगहरूको साधन बनेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र अनैतिक, भ्रष्ट र ठगहरूको साधन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष थापाले ट्वीटमार्फत भनेका छन्,‘कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार हटाउन र जोगाउन जेजस्ता अमर्यादित हर्कत भैरहेका छन्, त्यसले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निर्वस्त्र तुल्याएको छ।’
उनले संघियता बोझ मात्र होईन, राजनीतिक विकृतिको भण्डार साबित भएको बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले गणतन्त्र अनैतिक, भ्रष्ट र ठगहरूको साधन बनेको छ। पुनर्विचार गर्न ढिला नगरौं भनी आव्हान गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाको ट्वीटः कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार हटाउनरजोगाउन जेजस्ता अमर्यादित हर्कत भैरहेका छन्, त्यसले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निर्वस्त्र तुल्याएको छ।
संघियता बोझ मात्र होईन, राजनीतिक विकृतिको भण्डार साबित भएको छ । गणतन्त्र अनैतिक, भ्रष्ट र ठगहरूको साधन बनेकोछ। पुनर्विचारगर्न ढिला नगरौं ।
“संक्रमणबाट आंफू बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं” भन्ने नारा सहित “तपाईको मास्क खोई” अभियान अन्तर्गत गण्डकीमा कति ले पाए सजाँए
हाल सम्मको कामको विवरणः(
चेकजाँच गरिएको सवारी संख्या(२०३५३)सम्झाई बुझाई गरिएको व्यक्ति संख्या(१०१७२)मास्क वितरण गरिएको संख्या(८६२९)मास्क नलगाउनेलाई कारवाही संख्या(३१)
२०७८ को जनगणनामा चर्पी देखी स्मार्ट फोन सम्मका प्रश्न एकचोटी हेरौन
‘तपाईंको परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ दिन तपाईं तयार भएर बस्नुपर्नेछ किनकि जेठ २५ देखि गणकहरू यस्तै प्रश्न लिएर तपाईंको घर आइपुग्नेछन् । जवाफ भने उनीहरूले कोड नम्बरमा लेख्नेछन् ।
फ्लस भएको र सार्वजनिक ढलसँग जोडिएको भए १ लेखिनेछ । फ्लस भएको तर सेफ्टी ट्याङ्कीमा जमाइएको भए २, साधारण भए ३, सार्वजनिक भए ४ र नभएमा ५ नम्बर प्रयोग हुनेछ ।
चर्पी नबनाउने र छोरोछोरी विद्यालयमा पढ्न नपठाउने परिवारलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने भन्दै सरकारले सूचित गरेको धेरै समय भयो । ‘खुला दिसा मुक्त क्षेत्र’ घोषणा अभियान पनि पुरानो भइसकेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५६ लाख ६० हजार घरधुरीमा शौचालय बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि बनेका विद्यालयमा ५ हजार ३६ शौचालय छन् ।
यसपटक देशभर अनुमानित ७० लाख परिवार, ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको गणना हुनेछ । यसमा मुख्य ८० वटा प्रश्न रहनेछन् । ‘जनगणना सुरु हुन अब ६ सातामात्र बाँकी छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘यो राष्ट्रिय अभियानमा देशका सबै तह, तप्का, निकाय, समुदाय, परिवार, सबैखाले व्यक्तिको सहभागिता जुटाउँदै छौं ।’ जेठ २५ बाट सुरु हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणना असार ८ मा सकिनेछ ।
मुलुकमा बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरू एकै समयमा पुगेर निर्धारित समयभित्र परिवारका सबैको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन हुनेछन् । संकलित तथ्यांकको प्रशोधन, सारिणीकरण (टेबुलेसन) र प्रकाशन गरेपछि जनगणना प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसको तयारी तीव्र बनाएको छ । जनगणनाको मुख्य प्रश्नावली घरमूलीलाई सोधिनेछ । जसमा पाँच वर्षमाथिकाको व्यक्तिगत विवरण नाम, थर, जात/जाति, लिंग, जन्मदर्ता, उमेर, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म सोधिनेछ । नीतिअनुसार प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारबाट आधारभूत सुविधा उपभोगका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको शैक्षिक अवस्थाबारे प्रश्न सोधिनेछ । औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा र स्वअध्ययनसमेत खुलाइनेछ । प्रत्येकलाई १२ महिनामा कुनै पनि आम्दानी हुने काम गरे/नगरेको, आम्दानीको स्रोत, पेसा, क्षेत्रबारे पनि प्रश्न सोधिनेछ ।
परिवारका कुनै सदस्य अपांगता भएका छन् भने त्यसलाई स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । वैवाहिक स्थिति, १५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाह गरेका महिलालाई प्रजननसम्बन्धी प्रश्न सोधिनेछ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई कोसँग बस्दै आएको भनेर पनि विवरणमा खुलाइनेछ । बसाइँसराइ, परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य, परिवारमा अनुपस्थित स्वदेशमै रहेका र विदेश गएका संख्या तथा महिला/पुरुष उल्लेख हुनेछ ।
विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाम, थर, लिंग, शिक्षा, अवधि, जानुको कारण, देश खुलाइनेछ । प्रविधि प्रयोगले जनगणना कार्य छिटो र छरितो तुल्याउँछ । त्यसका साथमा प्रत्येक प्रश्नको उत्तरलाई कोड (सांकेतिक अंक) प्रयोग गरिनेछ ।
घरको जगदेखि छानासम्मको संरचनाबारे पनि गणकले प्रश्न सोध्नेछन् । घरको खानेपानीको मुख्य स्रोत उल्लेख हुनेछ । खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, बालिने बिजुली वा अन्य ऊर्जाबारे पनि टिपोट गरिनेछ ।
नेपालमा १९७० सालदेखि टेलिफोन सेवा सुरु भएको मानिन्छ । १९७४ जेठ १ गतेबाट सर्वसाधारणले टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाएको ‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उतिखेर ‘श्री चन्द्र टेलिफोन’ भनिन्थ्यो । त्यसैगरी २०५६ वैशाखदेखि जीएसएम मोबाइल फोन सुरु भयो ।
जनगणनाको प्रश्नावलीमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन र मोबाइलसमेत समेटिएको छ । मोबाइल साधारण कि स्मार्ट भनेर खुलाइनेछ । घरमा रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटर/ल्यापटप, इन्टरनेट, कार/जिप/भ्यान, मोटरसाइकल/स्कुटर, साइकल छन्/छैनन्, विद्युतीय पंखा, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर छ/छैन उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्ता साधनले नागरिकको जीवनस्तर मापन गर्न सघाउ पुर्‍याउने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । kantipur
कास्कीमा कोरोना संक्रमणबाट संक्रमितको संख्या आजसम्म ८ सय ७७ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
त्यस्तै हालसम्म कास्कीमा कोरोनाबाट ज्यान जानेको संख्या १ सय २० पुगेको छ ।जिल्लामा हालसम्म ९ हजार ४ सय ८० जनामा संक्रमण देखिएको छभने त्यसमा निको हुनेको संख्या ८ हजार ४ सय ८३ जना रहेका छन् ।यसैगरी
गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । जनमोर्चाले आफ्ना सांसद हराएकाले खोजी गरी पाउँ भनि निवेदन दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
आफ्ना सांसद खोजी पाउँ भन्दै जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले निवेदन दिएकी थिइन् ।प्रदेश सभा सचिवालयको अनुसार अर्को सुचना नआइन्जेल बैठक स्थगित भएको हो ।
जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही आजको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । उनको मोबाइल समेत अफ रहेको बताइएको छ । अहिले भने उनी चरक अस्पतालमा रहेको उनको स्वकीय सचिवले फेसबुक स्टाटस मार्फत जानकारी दिएका छन् ।शाहीको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिए पछि उनी अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने गरी निषेधको आदेश ९निषेधाज्ञा० लागू गरिएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यही १३ गतेको निर्णयानुसार आज बिहान ६ बजेदेखि नै उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आएको हो ।
आदेश लागू भएसँगै उपत्यकाका तीनै जिल्लामा अत्यावश्यक कामबाहेकका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने अन्य जिल्लाबाट समेत प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
कोरोना महामहारीको चपेटामा पत्रकार,सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न महासंघ कास्कीको अपिल
बुधबार, बैशाख १५, २०७८
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले कोरोना महामारीको सामना गर्नका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा निकै जटिल देखिएकाले संवेदनशील र गम्भीर हुन पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई महासंघले अपिल समेत गरेको छ । महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष विमला भण्डारी र सचिव माधव बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन रक्षाका खातिर जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले यसलाई पूणरुपमा पालना गरी कारोना संक्रमणको रोकथाममा सहयोग पुर्याई नियमित रुपमा तलव, सेवा र सुविधा उपलव्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं ।’
संकटपूर्ण समयमा सुरक्षित रुपमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई समाचारमूलक जानकारी तथा सामग्री उपलव्ध गराउन पनि सम्बन्धित सरोकारवालालाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सुरक्षित भएर सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरि आफ्नो काममा जिम्मेवार भएर खटिन पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव मतदान हुने बैठक चलिरहँदा सांसदनै गयल,गुरुङ भन्छन-मनाङका जनताको हित बिपरित जाँिदन
मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने बैठक चलिरहेका बेला आज २ जना सांसद अनुपस्थित भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे अनुपस्थित भएका हुन् । दुवैको मोबाइल अफ छ । कुनै सांसदसँग उनको सम्पर्क छैन ।
जनमोर्चाको केन्द्रले नै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन सांसद रहेको जनमोर्चाका दुई सांसद पियारी थापा र कृष्ण थापा भने आजको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित छन् ।
आज नै मतदान भयो र खिमविक्रम शाही आइपुगेनन् भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुनेछ र सरकार जोगिनेछ । शाही नआउँदा अविश्वासको प्रस्तावका लागि आवश्यक ३१ मत पुग्दैन ।
नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका दुई गरी २८ सांसदले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जनमोर्चाले निर्णय गरेपछि यहाँ सरकार ढल्ने स्थिति देखिएको थियो ।
सांसदले बोल्ने क्रम सकिन लाग्दासम्म शाही र गुरुङ संसदमा आएका थिएनन । यता गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव गुरुङले मनाङका जनताको दवावका कारण मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न नसकेको बताएका छन् ।-samadhan
कोरोना देखिएपछि काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित,यता बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, आजै शपथको तयारी
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ ।
नेताहरुलाई कोरोना संक्रमण भएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको काँग्रेस नेता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।‘नेताहरुलाई कोरोना देखिएको छ । त्यही भएर आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको छ’, नेता महतले जानकारी दिए ।
यसैगरी यता बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेलले ३ मन्त्री र ७ जना राज्यमन्त्री समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी काभ्रेका चन्द्र लामालाई दिएको बुझिएको छ । त्यस्तै मकवानपुरकी जुनेलीमाया श्रेष्ठ पनि राज्यमन्त्री बनेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका सांसद् सरेश नेपाल, नेकपा एमाले बागमती प्रदेशमा प्रमुख सचेतक नुवाकोटका केशवराज पाण्डे र दोलखाकी सरस्वती बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । धादिङका डा। रामकुमार अधिकारी र सिन्धुलीका प्रदिप कटुवाल पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पार्टी भित्र तीब्र विरोधकाबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपा एमालेका सांसदहरु मात्र रहेका छन् ।
गत पुस ५ गते मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणकुमार नेपाल र समाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएसँगै तीन वटै मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका थिए ।
नियुक्त भएका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।
कोरोना संकटमा अक्सिजनको अभाव भएको डाक्टरको भनाई,मन्त्रालय भन्छ–आत्मनिर्भर छौं,अभाव हुँदैन कसका कुरा पत्याउने
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९ं) को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण बढ्दा नेपालमा पनि अहिले संक्रमणको दोस्रो लहर चलेको छ ।
बाँकेको नेपालगञ्जसहित मुख्य शहरहरूमा संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगेका बेला अक्सिजन अभाव हुने देखिएको छ ।कोरोनाभाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै अहिलेसम्म ९ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । ती जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भएको सरकारी निकायकै अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भएको बताए ।त्यस्तै बाँकेका सीडीओ शिवराम गेलालले पनि अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढेसँगै अक्सिजनको माग अत्यधिक बढेको बताए । उपत्यकाका निजी अस्पतालहरूमा पनि पछिल्लो समय अक्सिजनको माग बढिरहेको छ ।
ह्याम्स अस्पतालका डाक्टर सविन कोइरालाका अनुसार ह्याम्स अस्पतालमा दैनिक सरदर ४ हजार लिटरका ६० वटा सिलिन्डरले पुग्दै आएकोमा अहिले अक्सिजनको ८० वटा सिलिन्डरको माग हुँदै आएको छ । डा कोइरालाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने दिनमा एउटा अस्पतालले ३ लाख २० हजार लिटर भन्दा धेरै अक्सिजन खपत गर्दै आएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय भारतमा देखिएको अक्सिजन अभावको असर नेपालमा पनि विस्तारै पर्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । कोरोनाका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजनको माग पनि बढ्ने हुनाले सिलिन्डर तत्कालै बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा समीरमणि दीक्षितले बताए ।
‘अहिले कोभिडका बिरामीहरू बढिरहेका छन्, उनीहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि सरकारले सिलिन्डर बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ डा। दीक्षितले भने । नेपाल अक्सिजनमा आत्मनिर्भर भएता पनि महामारीलाई मध्यनजर गरेर २० प्रतिशत थप जोहो गरेर राख्नुपर्ने वैज्ञानिक डा दीक्षितको भनाइ छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डा जागेश्वर गौतमले अक्सिजन अभाव नभएको दाबी गरे । नेपालमा अहिले एक महिनाका लागि पुग्ने ‘लिकुइड’ अर्थात् तरल अक्सिजन रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा अनुप बास्तोलाले बताए । (लोकान्तर)
गण्डकी प्रदेश सभाका ३ सांसदलाई कोरोना संक्रमण,अहिलेसम्म कहाँ के भयो त ?
गण्डकी प्रदेश सभाका ३ सांसदलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश सभाका एक सांसदका अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले ३ जनामा संक्रमण देखिएको बताएको छ ।
‘दललाई जानकारी गराएअनुसार समग्रमा ३ जनालाई कोरोना देखिएको छ,’ उनले भने ।यद्यपी स्वास्थ्य निर्देशनालयले यसबारे जानकारी भने दिइसकेको छैन । स्वास्थ्य निर्देशनलायका सूचना अधिकारी नवराज शर्माले दिउँसो १ बजे कोरोना रिपोर्ट आउने छ ।
सांसदहरुले भने आआफ्नो कोरोना रिपोर्ट पाइसकेका छन् । एमाले सांसद इन्द्रधारा विष्टले आफूहरुले कोरोना रिपोर्ट पाएको बताए । ‘हामीले आआफ्नो रिपोर्ट पाएका छौं, सबैको केके आयो त थाहा छैन,’ उनले भने ।गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठक अवरुद्ध भएपछि सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । बैठकमा एमाले सांसदहरुले कोरोना परीक्षण नगरी संसद राखिएको भन्दै बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।
विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पिसिआर परीक्षण माग गर्दै बैठकको सुरुआतमै आपत्ति जनाएका थिए ।सभामुखले बैठक स्थगित गरेपछि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरुको मंगलबार नै कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परीक्षणमा पोजेटिभ देखिने सांसदले सदनमा बोल्न नपाउने तर अविश्वास प्रस्तावमा मत हाल्न पाउने गरी समितिले निर्णय गरेको हो ।
बुधबार सांसदहरुको कोरोना परीक्षणको नतिजा आएपछि दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सदन डाकिएको छ ।मंगलबार एमाले सांसदहरु बैठकको सुरुआतमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । सांसद राजीव पहारीले कोरोना परीक्षणबिना बैठक राखिन नहुने तर्क गरेका थिए ।
यसैगरी भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा कार्यरत ७ चिकित्सकसहित ७० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । ओटी, इमर्जेन्सी, पारामेडिक, आईसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना लागेको हो । जसमा ७ जना इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सक छन् ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा देखापरेको कोरोनाको महामारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । २०७७ पछि विस्तारै तङ्ग्रिदै गएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई फेरि बढेको महामारीले प्रभावित गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।त्यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भोलीदेखि लागू हुनेगरी निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यका छाडेर घर फर्किनेहरुको चाप बढेको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकामा भोलीदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।आज पनि बिहानैदेखि उपत्यका छाडेर घर फर्किनेहरुको विभिन्न चोकमा भीड लागेको छ ।
कोटेश्वर र थानकोट नाकाबाट उपत्यका छाड्नेहरुको भीड बढेको छ । त्यसबाहेक बालाजुतर्फको नाका र बल्खु नाकाबाट समेत हजारौं व्यक्ति बाहिरिएका छन् ।
केही समय अघिसम्म यात्रुविहीन गुडेका सवारी साधनले खचाखच यात्रुहरु लिएर गुडेका छन् । यसले गर्दा काठमाडौंका धेरै ठाउँमा लामो जाम समेत भएको छ ।
पोखरामा लकडाउनको प्रभाव,अपडेट
पोखरासहित कास्की जिल्ला भर आजदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा कडाइ गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि प्रशासनले आज बिहान ६ बजेबाट जिल्लाभर सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेकोमा आज जोर नम्बरका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको कास्की प्रहरी प्रहरी प्रमुख , एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आज पहिलो दिन भएकोले अटेर गरी सवारीसाधन चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएर होल्ड गराएर राखिएको र भोलिबाट पनि अटेर गरे नियम अनुसार कडा कारबाही गरिने एसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रशासनले वैशाख १५ गते बिहान ६ बजेबाट वैशाख २१ गते राति १२ बजे सम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर हिँडडुल गर्न, सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार सञ्चालन गर्न, मानिस भेला हुन, भिडभाड गर्न सभा जुलुस गर्न जात्रा महोत्सव गर्न निषेध गरेको छ ।
प्रशासनले औषधी एवं स्वास्थ्य सामाग्रीका पसलहरू २४ सै घण्टा खुला रहने तथा उपभोग्य, खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पसलहरू बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न भनेको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, सपिङ मल र ठुला स्टोरहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा टेक अवे सेवा मात्र सञ्चालन हुने गरी बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ ।
जिल्ला भित्र सञ्चालन हुने अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेक यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनहरूमा सो अवधिभर जोरबिजोर प्रणाली लागु भएको प्रशासनले जनाएको छ । जोरबिजोर प्रणाली अन्तर्गत जोर दिनमा जोर नम्बरका सवारीसाधन र बिजोर दिनमा बिजोर नम्बरका सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने दैनिक सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय पोखराको समन्वयमा शाखा प्रबन्धकले न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् ।
पाचथर पुगेर सिजि ग्रुपले दियो वाइवाइ उपभोक्तालाई स्कुटर उपहार
मङ्लबार, बैशाख १४, २०७८
ईटहरी/ सिजि ग्रुप द्वारा उत्पादित ‘वाइवाइ जिङ’ चाउचाउले यतिबेला प्रदेश १ मा विभिन्न स्किमहरु ग्राहकहरुको लागि ल्याएको छ । जस अन्तर्गत स्कुटर लगायतका अन्य उपहारहरु बिजेतालाई बितरण कार्य गरिरहेको छ । यस्तैमा पछिल्लो समय उदयपुरको गाईघाटमा ‘वाइवाइ जिङ’ उपभोक्ता बिजेतालाई स्कुटर बितरण पछि सिजि ग्रुपका प्रदेश १ समुहले पाचथरको रविमा पुगेर बिजेतालाई पुरस्कार बितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
‘जिङमा जित उपभोक्ता उपहार योजना’ कार्यक्रम अन्तर्गत ११ औ स्कुटर बितरण कार्यक्रम पाचथरमा सम्पन्न भएको हो । ईलाम निवासी पृथ बहादुर कामिलाई पाचथरको मुख्य बजार रविमा अविर जात्रा गर्दै बैशाख ९ गते सिजि ग्रुपका सिजि फुड्स (नुडल्स डिभिजन) का प्रदेश १ प्रमुख (सेल्स हेड) पुण्य प्रसाद लुइँटेल, सहायक प्रबन्धक (मार्केटिङ तथा ब्राण्ड प्रोमोसन) रबिन्द्र मास्के लगायतको टिम पुगेर पुरस्कार बितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
पाचथर लगायतका जिल्लाहरुमा यस्ता उपहार योजनाले सिजि ग्रुपका उत्पादन प्रती उपभोक्ताको आकर्षक बढ्दै गएको पाचथर जिल्लाका डिस्ट्रीब्युटर सुजन श्रेष्ठले बताए । यस्तै स्कुटर बितरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ प्रमुख लुइँटेलले उपभोक्ताको चाहना अनुरुप अझै यस्ता योजनालाई निरन्तरता दिने हौसला मिलेको बताए । उनले भने ‘निम्न बर्गका ब्यक्तिहरुलाई पनि यस्तो योजनाले राहत मिल्ने महसुस गरेको र कम्पनिको तर्फबाट आउदा दिनहरुमा पनि उपभोक्ताहरुको लागि राहत मिल्ने अझै योजनाहरु सार्बजनीक गरिने छ ।’
यसअघि सिजि ग्रुपका प्रदेश १ शाखाले १० ओटा स्कुटर संगै अन्य थुप्रै पुरस्कारहर बितरण गरिसकेको छ भने सिजि फुड्स द्वारा उत्पादित वाइवाइ जिङ चाउचाउको जिङमा जित उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ताहरुले अझ धेरै स्कुटरहरुको साथै ट्याब्लेट, स्मार्ट वाच, स्केटिङ साईकल, साईकल, स्पिनिनर, लुडो लगायत हात खाली नजाने उपहारहरु जित्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
विकाश लामिछाने र समीक्षा पोखरेलको नयाँ गीत ‘यो जिन्दगीको‘ सार्बजनिक
विकाश लामिछाने र समीक्षा पोखरेलको नयाँ गीत ‘यो जिन्दगीको‘ बजारमा आएको छ । ‘यो जिन्दगीको‘ शीर्षकमा रहेको गीतमा गायक सत्यराज आचार्यले स्वर दिएका छन् ।गीतकार प्रमीला बस्नेतको शब्द सुन्न सकिन्छ भने संगीत सरोज प्याकुरेलको रहेको छ।
रोमान्टिक र जीवन्त अभिनय रहेको गीतको भिडियोमा सरोज प्याकुरेलको निर्देशन गरेका छन् ।गीतमा प्रेमील जोडी बिचको भावनात्मक सम्बन्धलाई निकै कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
गीतको म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन बासु बरालले गरेका हुन् भने कोरियोग्राफी केशव राज भट्ट र दिन्सोन शाहको सम्पादन समाबेश छ।
अनलाईन सुपर किड्स कम्पिटिसन, २०२०’ का बिजेताहरुको गीत ’सुन हैन’ सार्वजनिक
लकडाउनको भरपुर सदुपयोग गरि सम्पन्न गरिएको अनलाईन सुपर किड्स डान्स एन्ड सिंगिङ कम्पिटिसन, २०२०’ का बिजेताहरुको नयाँ गीत ’सुन हैन’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । चर्चित गायक, रचनाकार तथा संगीतकार धर्मेन्द्र सेवानको शब्द रहेको उक्त गीतमा धर्मेन्द्र सेवानले नै संगीत भरेका छन भने गीतको एरेन्ज बालकृष्ण चौधरीले गरेका हुन् ।
उक्त गीतको कोरियोग्राफी भने निशिला शाक्य र उनको टिमले गरेका हुन । ड्रीम सर्च एजेन्सीको अफिसियल युट्युव च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको ’सुन हैन’ बोलको उक्त गीतमा ’अनलाईन सुपर किड्स डान्स एन्ड सिंगिङ कम्पिटिसन, २०२०’ सिंगिङ तर्फका विजयी प्रतिस्पर्धीहरु पद्मजा कार्की, विक्रम बस्नेत, प्रियान्कुश गौतम, आज्ञा थपलिया, अर्नव बन, आश्नेहा बिनाडीले आफ्नो आवाज भरेका छन । यस्तै सार्वजनिक भिडियोमा ’अनलाईन सुपर किड्स डान्स एन्ड सिंगिङ कम्पिटिसन, २०२०’ का डान्स तर्फका विजयी प्रतिस्पर्धीहरुलाई फिचरिङ गरिएको छ ।
जसमा सोनी लामा तामाङ, ओम राजवंशी, अपुर्व कर्मचार्य, प्रलक्षा कार्की, कृष तामाङ, दिवम राखेचा, दृष्टि धिमाल र आज्ञा थपलियाको अभिनय देख्न सकिने छ । मिरा साउन्ड स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतकोे म्युजिक भिडियोलाइ ड्रीम सर्च एजेन्सीको फाउन्डर तथा निर्देशक कमल निकोन क्षेत्रीले निर्माण गरेका हुन् भिडियोमा मेकअप आर्टिष्टको रुपमा शैलाजा शाह छिन् भने प्रोडक्सन डिजाइन आशिश नापित हुन् । भिडियोलाइ राधाश्याम दुलालले निर्देशन गरेका हुन् ।
त्रिविका सबै परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित
सोमवार, बैशाख १३, २०७८
त्रिभुवन विश्विविद्यालयले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पूर्वनिर्धारित वार्षिक तथा समेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा वैशाख १४ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन र निषेधाज्ञा हुने भएपछि त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका संचालित भइरहेका र संचालनको प्रक्रियामा रहेका वार्षिक तथा समेस्टर प्रणालीका विभिन्न परीक्षाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोनाले कहाँ के भयो त?हेर्नुहोस यसरी उग्र रुप लिदै
पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी सरकारी अस्पताल भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भएको छ ।
जसका कारण संक्रमितहरू उपचारबाट बन्चित भएका छन् । गत बर्ष सरकारले केन्द्रबाटै चिकित्सक पठाएर सहयोग गरको भए पनि यसपटक चिकित्सक अभावमा अवस्था भयवाह भइसकेको छ ।जिल्लाभर १ हजार २ सय ६६ सक्रिय संक्रमित छन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राँझा विमानस्थल नजिकैको ह्वाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने केही होम आइसोलेसनमा छन् ।भेरी अस्पतालले कोरोनाको संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल हुनसक्ने बताइसकेको छ ।
दैनिक एक सयभन्दा बढी कोरोनाका विरामीहरू थपिदै गएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा आगामी बिहीबार राति १२ बजेदेखि एक साता निषेधाज्ञा लागू गरिने भएको छ ।
सोमबार बसेको काठमाडौं‚ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।यसैगरी त वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको २ नम्बर प्रदेश यस वर्ष पनि पुनः ‘हटस्पट’ बन्ने सम्भावना देखिँदैछ ।छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको भयावह अवस्था देखिए पछि भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरू भित्रिएसँगै जोखिम बढेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा थप चारजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सोमबार कास्कीका २ र स्याङ्जा तथा म्याग्दीका १÷१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–२५ का ९१ वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान पौने ६ बजेतिर मृत्यु भएको छ । उनलाई वैशाख ७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको पोखराको मेडिप्लस अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिका–१ की ५५ वर्षीय महिलाको सोमबार दिउँसो पोखराको मेडिप्लस अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । उनलाई शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ती महिलालाई कोभिड–१९ डबल म्युटेन्ट देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यसैगरी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१२ का ५८ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा उपचारको क्रममा सोमबार मृत्यु भएको हो ।
यस्तै म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ का ७८ वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका वृद्धको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा सोमबार बिहान सवा ३ बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
थप ४ जनासँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१५ पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।यता
गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा पहिले कोरोनाको विरामी राखिन्थ्यो । मध्य फागुनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लाबाट उपचार गराउन संक्रामक अस्पतालमै ल्याउने निर्णय गर्‍यो । वागलुङको धौलागिरि अस्पतालसहित सबै अस्पतालमा अन्य बिरामीको उपचार गर्ने र गम्भीर कोरोनाको बिरामीलाई प्रदेश संक्रामक अस्पतालमा ल्याउने सरकारको निर्णय थियो ।
संघीय सरकार मातहतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड उपचार केन्द्र पनि बन्द भइसकेको छ ।यही बेला संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ र, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालले बिरामीको चाप धान्ने अवस्था छैन ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विकास गौचन भन्छन्, ‘बेड खोज्दै दिनकै १५,१६ जनाको तारन्तार फोन आइरहन्छ तर राख्ने क्षमता नै छैन । यस्तै अवस्था हो भने अभाव थेग्न सकिन्न ।’
तीन दिन अगाडिसम्म २० देखि ३० जनासम्म बिरामी थिए, अहिले ४७ जना बिरामी पुगिसके । यति नै संख्यालाई फर्काउनु परिरहेको छ । ‘यस्तो परिस्थितिमा संक्रामक अस्पतालमा मात्र आइसोलेसन बेड राखेर हुँदैन । अरु अस्पतालले आलटाल गरिरहेको छ,’ मनिटरिङ रुमबाट कोरोना बिरामीको मनिटरिङ गरिरहेका डा अप्टिक्स सापकोटाले भने, ‘बिरामीले फोन गर्दै बेड सोध्छन् तर खाली नै छैन । हामीमाथि मात्रै भर पर्ने हो भने आफ्नै आँखा अगाडि भयावह अवस्था आउँछ ।’
प्रदेश संक्रामक अस्पताल ५० बेडको भनिए पनि ४७ बेडमात्र सञ्चालनमा छ । आईसीयू छ, तर चलाउने जनशक्ति नहुँदा बन्द छ । ९ बेडको आईसीयू चलाउन कम्तीमा ३७ जना जनशक्ति चाहिन्छ, तर अस्पतालभरिमा जम्मा ३८ जना जनशक्ति छ । त्यसैले आईसीयूमा पनि अन्य खालका बिरामी राखिएको छ । ‘जनशक्ति हुनुपर्ने कति हो भनेर कायम गर्न व्यवस्थापन समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन ।
सरकारले ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ । कास्कीमा मात्र ६ सय ३८ जना सक्रिय संक्रमित पुगिसकेका छन् । संक्रमितको दर पनि तीव्र गतिमा बढिरहेकाले कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।
के तपाँईले माक्स लगाउन बिर्सनुभयो?होशियार पोखरामा यस्तो नियम
कास्की प्रशासनले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सचेतना एवम् अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
पोखरा बजारमा दिनानुदिन सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुका साथै विभिन्न समारोह हुने पार्टी प्यालेसहरूमा अनुगमन बढाएको हो ।
प्रशासनले आज कास्कीको पोखराका अधिकतम भिडभाड हुने ठाउँहरू चिप्लेढुङगा, अमरसिंह चोक र पृथ्वीचोकमा मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई एक घण्टा नियन्त्रणमा लिई कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतमा जानकारी दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा आज मास्क नलगाउने एक हजार ७८ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कोरोना सचेतनाबारे प्रशिक्षण दिइएको छ । उक्त अवसरमा सामुदायिक प्रहरीको सक्रियतामा मास्क समेत वितरण गरिएको थियो ।
प्रशासनले पोखराका विभिन्न पाँच वटा पार्टी प्यालेसमा पनि अनुगमन गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा प्रत्येक नागरिक आ–आफ्नो ठाउँमा सतर्क बन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै प्रजिअ गौतमले प्रशासनले अनुगमनको कामलाई निरन्तर अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दै, तीन साता मुलुकभर लकडाउन गर्ने के होला त?पुरा समाचार पढ्नुहोस
मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्दैछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ५ बजे डाकिएको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सीसीएमसीले गरेको सिफारिस अनुमोदनको तयारी छ ।
संक्रमण तीव्र भएपछि आइतबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले कम्तीमा तीन साता मुलुकभर लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको छ । लकडाउनमा नगए सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सुझाव दिइएको छ ।
लकडाउन नभएको खण्डमा शहरी क्षेत्रमा ५ सय र अन्य जिल्लामा २ सय सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सीसीएमसीको सिफारिस छ । उपत्यकामा १ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यस्तै विदेशी नागरिकलाई सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ भने स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई परीक्षण रिपोर्टका आधारमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोमबारदेखि पूर्वनिर्धारित सबै किसिमका परीक्षा पनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काललाई स्थगन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका विद्यालयहरुका पूर्व निर्धारित गरिएका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले भौतिक रुपमा हुँदै आएका सबै प्रकारका परीक्षाहरु अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक डा खगराज अधिकारीका अनुसार बैठकले देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित हुने पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न र भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
uण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको कार्यसूचीअनुसार सोमबार प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बोल्नेछन् । त्यसपछि अरु प्रदेशसभा सदस्यले बोल्न समय पाउने छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि बल्ल मतदान हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाएका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा २८ जनाको हस्ताक्षर छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि पक्षमै मतदान गर्ने विश्वास विपक्षी दललाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘अब काँध थाप्न सक्दैनौं, अविश्वासको प्रस्तावमै हस्ताक्षर गर्छौं’२७ सदस्य रहेको एमालेको साथ जनमोर्चाले छोडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन्  । यस्तै जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र एकजना सांसद छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइँको पाएपछि वैशाख १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै तीन दलले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन दिएका थिए ।
शुक्रबार, बैशाख १०, २०७८
२०७८ वैशाख १० शुक्रवार, एकादशी – कामदा एकादशी व्रत, अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस, प्रतिलिपि अधिकार दिवस – 23 Apr 2021
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ। धेरै फाइदा उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिका माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन्। पुरानो सम्झौता भंग हुन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिन सक्छ। मौका आए पनि समयमा जागरुक नबन्दा पछि परिनेछ। सहयोगीहरूले बीचैमा हात झिक्न सक्छन्। लेनदेनमा अलि होसियार रहनुहोला। दिगो काम प्रारम्भ गर्न केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो प्रतिफलबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। काम पूर्ण नभए पनि मिहिनेतले आंशिक लाभ दिलाउनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – अवसर आए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। सामान्य आम्दानी भए पनि काम पूर्ण सम्पादन नहुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। तापनि सम्पादित कामबाट केही धन लाभ हुनेछ। मिहिनेतले आम्दानी बढ्नेछ। तर, विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – परिवेश उल्लासमय रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। भेटघाटमा अलमलिनाले काममा बाधा हुनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि काम गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला। सानातिना समस्यामै अल्झनुपर्नेछ। अरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। अर्थअभाव खट्किए पनि आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। विदेश भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्ने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन्। दिगाे काममा जग बसाउन सकिनेछ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – प्रतीक्षित नतिजा कमजाेर देखिए पनि आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ। तर, पहिलेको लाभांश अरूलाई समेत बाँड्नुपर्ला। खर्चिलो काम गर्नुपर्ने देखिएकाले कर्जामार्फत धन जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ। तत्काल फाइदा लिँदा पछिको लाभांश गुमाउनुपर्ला। सरसापटमा केही धन बाहिरिने देखिन्छ। श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातलागी हुन समय लाग्नेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – समयमा निर्णय लिन नसक्दा पुरानै काम दोहोर्याउनुपर्ला। नियमित काम सम्पादन भए पनि निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुनेछ। बेसुरमा काम गर्दा समस्या पर्नेछ। तापनि, लगनशीलताले काम सम्पादन हुनेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। भविष्यका लागि भने कामको जग बसाउने मौका छ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। धर्मकर्म तथा सेवामूलक काममा प्रवृत्त भइनेछ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। परिस्थिति अनुकूल हुनाले रोकिएको काम बन्न थाल्नेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ तर शरीर कमजोर बन्नेछ। अर्थका हिसाबले पनि दिन कमजोर रहला। तत्काल चुनाैती देखिए पनि अवसर खाेज्ने समय छ। धेरै लाभ नभए पनि काम गर्न सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्, गोपनीयतामा अलि सजग रहनुहोला। मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। बिछोडिएका आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। विगतका कमजोरी सुधार गर्ने मौका छ। घरमा सुख र समृद्धिको आगमन हुनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न पनि सकिनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – वैधानिक प्रावधानले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पार्नेछ। अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। केही चुनौतीहरू देखिनेछन्। काममा सोचेको फाइदा उठाउन नसकिएला। प्रतिस्पर्धी बढ्नाले समस्या थपिएलान्। चिताएका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ला। फजुल खर्चका साथै ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनुहोला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुनाले बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीले राम्रो साथ दिनेछन्। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ।
सय वर्ष अघिदेखिको इतिहासलाई निरन्तरता दिदै पूजा
बिहिबार, बैशाख ९, २०७८
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ कालिका नगरस्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल कालिका मन्दिरमा सय वर्ष अघिको इतिहासलाई निरन्तरता दिदै चैते दशैं विशेष पूजा गरिएको छ ।
सय वर्ष अघि समाजसेवी स्व.भीमबहादुर बस्नेतको सकृयतामा स्थानीयवासीको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना सहित स्थापित मन्दिरलाई त्यस यता समाजका हरेक व्यक्ति, संघ संस्था एवम् समूहको साझा प्रयासमा व्यवस्थित गर्दै पूजाआजालाई निरन्तरता दिदै आइएको छ ।
मन्दिरमा प्रत्येक वर्षको आश्विन शुक्ल पक्ष(बडा दशैं) का साथै चैते दशैंमा विशेष पूजाआजा गर्ने गरिएको स्थानीय बुद्धिजीवि विष्णुबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
सय वर्ष अघिदेखिको इतिहास र परम्परालाई निरन्तरता दिदै यस वर्ष पनि चैते दशैंका अवसरमा मन्दिरमा विशेष पूजाआजा गरिएको बताउँदै उहाँले उक्त पूजामा पोखरा–३२ सहित आसपासका भक्तजनहरू उपस्थिति रहेको जानकारी दिनुभयो ।मनोकामना पूरा हुने जनविश्वासका कारण कालिका मन्दिरको आस्था र विश्वास दिनानुदिन बढीरहेको बताउँदै उहाँले यसको समग्र विकासका लागि स्थानीय संघ संस्था, क्लब, आमा समूह एवम् स्थानीय तहको साझा प्रयास आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत लामेआहालबाट करिब तीन सय मिटर उचाइमा रहेको कालिका मन्दिरलाई यस क्षेत्रको आकर्षक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । प्रगतिशिल सामूदायिक बन क्षेत्र अन्तर्गत उत्तरी भेगमा रहेको यस मन्दिरमा मनले चिताएको पुग्ने विश्वासका कारण पछिल्ला वर्षमा भाकल पूजा सहित आउनेको क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।
गलकोट स्पोर्ट्स क्लव जापानको छैठौं रनिङ शिल्भर कप हुँदै
जापानको टोकियोमा स्थापित गलकोट स्पोर्टस क्लव टोकियोको ७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा छैटौं रनिङ सिल्भरकप प्रतियोगिता अन्तरगत पुरुष भलिबल प्रतियोगिता संचालन गर्ने भएको छ ।
क्लबले मे २४ तारिख सोमबार टोकियोको ओता सिटी हिगासी कामतामा रनिङ सिल्भरकप प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ । अप्रिल १९ तारिक कार्यसमितीको भर्चुअल बैठकबाट अध्यक्ष लक्ष्मण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रतियोगिता संचालन मुल आयोजक समिती गठन गरिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागिताका लागी जापानमा रहेका भलिबल खेलप्रेमी संघ सस्था र खेलाडीहरुलाई सहभागिताका लागी अनुरोध समेत गरिएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रथम पूरस्कार ३ लाख, सिल्भर कप र दित्तिय पुरस्कार २ लाख येन कप सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने भएको छ । कल्बले यसपटक सेमीफाईनल पुग्ने २ टिमलाई सान्तवना पुरस्कार नगद ५०÷५० हजार जापानी एन मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने खेलाडीहरुलाई ट्रफी र सम्मान पत्रले सम्मान गर्ने गरिने क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मण कार्किले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ८ वटा बिधागत पुरस्कार अन्तरगर्त वेस्ट स्पाइकर, वेस्ट सेटर, वेस्ट क्विकर, वेस्ट ब्लकर, वेस्ट डिफेन्सिव, वेस्ट सर्भर, वेस्ट लिब्रो, वेस्ट कोच लाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मे २० तारिक समयअवधी सम्म औपचारिक रुपमा टिम दर्ता भएका खेलाडीहरुलाई खेलमा समाबेश गराउने मुल आयोजक समिति प्रचारप्रसार संयोजक तथा क्लवका सचिव हिमाल कडेलले जानकारी दिनुभयो । जापानमा निरन्तर छैठौ भलिबल प्रतियोगिता गर्ने गलकोट स्पोर्टस् क्लव टोकियो एक मात्र नेपाली संस्था हो ।